ရည်းစားလူလု အူနုကျွဲခတ် | CeleTrend
အမည်က အောင်ဇော် အများသိတာက သရဲလေးပေါ့ဗျာ ။ ကျွန်တော်တို့မြို့က အကိုကြီးကကားမောင်းတော့ သူ့တပည့်အဖြစ် ခေါ်ထားတာ ။ ကုန်ကားနှင့် နေရာအနှံကို ပစ္စည်းတွေ သယ်ယူပို့ပေးရတယ် ။ သူ့ဆီကကားမောင်းတဲ့ ပညာကို သင်ယူကာ လိုင်စင်ရမှ ကားမောင်းအလုပ်လျှောက်ဖို့ ရန်ကုန်မှာ ကျန်ရစ်ပြီး ဘုန်ကြီးကျောင်းမှာနေပြီးတော့ အလုပ်လိုက်လျှောက်နေတယ် ။ ကုမဏ္ဏီတစ်ခုမှာ အလုပ်ရတယ် ။ သူတို့အရောင်းထွက်ရင် ကားမောင်းကာ သူတို့သွားလိုရာကို ပို့ပေးရတယ် ။ ကိုယ်က ကားမောင်းရုံသာမကအရောင်းပိုင်းကိုလည်း ကူရောင်းပေးတော့ ဆိုင်တွေနှင့်လည်း ရင်းနှီးလာသလိုဘဲ အရောင်းဝန်ထမ်းတွေကလည်း ချစ်ကြတယ် ။ကံကြမ္မာဆိုးချက်ဝင်လာတော့ ကားဘရိတ်ပေါက်ပြီး ရှေ့ကကားကို သွားတိုက်မိတော့ ၂ လကျော် လုပ်ထားတဲ့ငွေအပြင် ရမဲ့လစာ ထဲကနေ တစ်ဝက်ပေါင်းကာ လျော်လိုက်ရတယ်
အဲဒါကိုသနားပြီး ဆိုင်ကဆိုင်ရှင်တစ်ယောက် သိပြီး ကျွန်တော့ကို သူ့ဆီမှာ ကားမောင်းဖို့ပြောပြီး လစာကိုလည်း ကုမဏ္ဏီလစာထက် ပိုပေးတယ် ။ ကျွန်တော်လည်း ကုမဏ္ဏီကထွက်ပြီး သူဆီမှာ သွားအလုပ်လုပ်တယ် ။ သူရဲ့ဆိုင်က ဆိုင်ကြီးဆိုတော့ ကားမောင်းရုံသာမက အားရင်လည်း ဆိုင်ကူရောင်းပေးရတယ် ။ ဆိုင်မှာရှိတဲ့ စော်လေးတွေကလန်းနေတော့ အလုပ်လုပ်ရတာက ပင်းပန်းမူမရှိဘူးလို့တောင် ထင်ရတယ်ဗျ ဟား..ဟား..အဲဒီအထဲက ညိုချေဆိုတဲ့ ကောင်မလေးနှင့် ကျွန်တော် ချစ်ကြိုက်သွားတယ် ။ ညိုချောမှာ မောင်တစ်ယောက်နှင့် ညီမလေးတစ်ယောက်ရှိတယ် ။ သူကအကြီးဆုံးဘဲ သူ့အမေကလည်း သဘောတူတဲ့အဆင့်ကို ရောက်နေပြီမှ ချမ်းသာတဲ့ ကျွန်တော့သူဌေးရဲ့ အငယ်နှောင်းလေးဖြစ်သွားတယ် ။ တနေ့မှာ သူတို့က ရုံးခန်းထဲမှာ လိုးနေတုန်း ပက်ပင်ကြီးသွားတွေ့တယ် ။
ကျွန်တော်လည်း မသိယောင်ဆောင်ကာ ထွက်လာခဲ့ရတယ် ။ ညနေမှဘဲ မိသားစုငွေကြေးအတွက် ဒီလိုဖြစ်သွားရတာပါလို့ ပြောပေမဲ့ ရည်းစားလူလု အူနုကို ကျွဲခတ် ခံလိုက်ရပေမဲ့ ဒေါသကို ထိန်းကာ သူနှင့်ပြတ်သွားတယ် ။ ဆိုင်မှာ လုပ်ရင်းနှင်း ဆိုင်ကို လာဝယ်တဲ့ အကိုတစ်ယောက်နှင့်ရင်းနှီးပြီး စကားစမိရာမှ သူလုပ်တဲ့ အလုပ်က ငွေများများရတယ် ။ဒါပေမဲ့ ပိုချွဲတတ်ရတယ် ။ ပြောကာ အဓိက အလုပ်လုပ်ရပုံကို မပြောဘဲထိန်ချန်သွားတယ် ။ ကျွန်တော်ကလည်း ဒီဆိုင်မှာ ဆက်မနေချင်တာမို့ သူ့ကို အလုပ်လုပ်မယ်။ ပြောလိုက်တော့ သူနေတဲ့ တိုင်ခန်းကို ပြောင်းနေဖို့ ပြောတော့ သူနှင့်အတူ ပြောင်းကာနေပြီးမှ သူရဲ့အလုပ်အကြောင်းတွေကို ပြောပြလာတယ် ။ သူအလုပ်က လင်မရှိတဲ့ မုဆိုးမတို့ လင်နှင့်ဝေးကွာနေတဲ့မိန်မတို့ကို ဖြည်းဆည်းပေးရတယ် ။ သူနှင့်အတူ ပြောင်းနေတော့ သူက ကျွန်တော့ကို အဝတ်အစားတွေ ဝယ်ပေးပြီး ဘယ်လိုကနေ ဘယ်လိုပြုစုရတယ် ဆိုတာကို သင်ကြားပေးတော့တယ် ။ ဖုန်းတစ်လုံးဝယ်ပြီးအောကားတွေဘဲ ထိုင်ကြည့်ခိုင်တယ် ။ ဇတ်ကားတွေကလည်း အန်တီနှင့်ကောင်လေးတွေရဲ့ ဇတ်လမ်းတွေဘဲ ။
သူဆီကို ၃ ရက်အကြာမှာသူက အိပ်လိပ်စာ တစ်ခုကိုပေးကာ ပထမဦးဆုံးအလုပ်ကို လုပ်ခိုင်းတယ် ။ ကျွန်တော်လည်း သူပေးတဲ့လိပ်စာအတိုင်း သွားလိုက်တယ် ။ ကွန်ဒိုတိုက်ခန်းထဲကို ဝင်သွားတော့ ခန္ဒာဝဝနှင့် အန်တီကြီးတစ်ယောက်တံခါးလာဖွင့်ပြီး အတွင်းထဲကို သူနှင့်အတူဘဲ ဝင်သွားလိုက်တယ် ။ ဝတယ်ဆိုပေမဲ့လည်း သိပ်ပြီးတော့ အဝကြီးမဟုတ်ဘူး ။ မောင်လေး မင်းဘယ်သူနှင့်မှ မလုပ်ဖူးဘူး ဆိုတာ တကယ်လား မေးလာတော့ ဟုတ်ကဲ့ပါ မမ လို့ ပြန်ဖြေလိုက်တယ် ။ ကျွန်တော့အတွက် ကော်ဖီတစ်ခွက် ဖျော်ပေးပြီး ချပေးကာ ကော်ဖီသောက်ခိုင်းတယ် ။ ကော်ဖီသောက်ပြီးတော့ သူက ကျွန်တော့ကို ရေချိုးခိုင်းတယ်။ အခန်းထဲကိုရောက်တော့ သူက အဝတ်စားတွေချွတ်ပြီးကုတင်ပေါကနေ ဘေးတစ်စောင်လေးလှဲကာ ကျွန်တော့ရဲအဝတ်တွေကို ချွတ်ခိုင်းတယ် ။ ကျွန်တော်လည်း အားလုံးကို ချွတ်ချလိုက်တော့ သူက ကျွန်တော့ငပဲကိုကြည့်ပြီး သဘောကျသွားတယ် ။ သူ့ရှိရာကုတင်ပေါ်ကို တက်သွားတယ် ။ သူက မောင်လေး မမပူစီလေးကို ယက်ပေးမလား မေးတော့ ဟုတ်ကဲ့ရပါတယ် မမ လို့ ပြန်ဖြေကာ သူ့ရဲ့ပေါင်ကြားကိုခေါင်း တိုးဝင်ကာ ယက်ပေးလိုက်တယ် ။ သူရဲ့အစေ့လေးကို လက်မနှင့်ဖိဖိကာ ချေပေးပြီး နုတ်ခမ်းနှင့်ငုံကာ ဆွ။ သူက အိုး.. * တစ်ချက်ညီးပြီး မောင်လေးက မလုပ်ဖူးသာပြောတယ် ဆရာကြီးဘဲ ပြောလာတော့ သူ့ကို ဇတ်ကားတွေထဲုအတိုင်းဘဲ စမ်းလုပ်ကြည့်တာပါ လို့ ပြန်ဖြေပြီး ဆက်ပြီးတော့ ယက်ပေးလိုက်တယ် ။
သူ့လက်တွေက ဆံပင်ကိုဆွဲပြီး အား.. မောင်လေးရယ်..ကောင်းလှချညလားကွယ်.. အား.. လို့ ညီပြီးတော့ သူပြီးသွားတယ် ။ သူ့ရဲ့အရည်တွေက မျက်နှာမှာစင်သွားတော့ သူက ဘေးက အဝတ်နှင့် သုပ်ပေးပြီး အိုး.. အရမ်းကောင်းလိုက်တာကွာ မင်းက တကယ်ဆရာကြီးဘဲ လို့ ပြောကာ ကျွန်တော့ငပဲကို လက်နှင့်ကိုင်ကာ ဂွင်းတိုက်ပေးပြီး သူက မောင်လေး မမကို ချစ်ပေးတော့ကွယ် လို့ ပြောတယ် ။ ကျွန်တော်လည်း သူ့ရဲ့ပူစီအကွဲကြောင်းကို ညီလေးနှင့်ဖိပွတ်ကာ ၃ ချက်ခန့် ဆွဲပြစ်ပြီးမှ အထဲကို ဖြည်းဖြည်းချင်း သွင်းလိုက်တယ် ။ သူ့ရဲ့လက် ကျွန်တော့လက်မောင်းကို တင်းတင.ရှီး.. လို့ ညီသံလေးထွက်လာတယ် ။ ကျွန်တော်လည်း ကျွန်တော်လည်း သူ့ရဲ့ အရည်တွေရွှဲကာ ဖောင်းကြနေတဲ့ ဖားခုံညင်းကို တစ်ချက်ချင်းဘဲ ဖြည်းဖြည်းချင်း လုပ်ပေးကာ အစေ့လေးကို လက်မလေးနှင့်ဖိဖိကာ ချေပေးလိုက်တယ် ။ အား..ရှီး.. မောင်လေးရယ်.. အရမ်းထိတယ်ကွယ် မောင်လေး.. လုပ်တတ်လိုက်တာ..အား..ရ အား.. လို့ ညီရင်းကာ ကိုယ်လေးကြွကာ ထထိုင်ပြီး ကျွန်တော့ရဲ့နုတ်ခမ်းကို နမ်းပေးလာတယ် ။ ကျွန်တော်လည်း သူ့နောက်ကျော့ကိဖက်ပြီး ဆွဲကာ ဆောင့်လုပ်လိုက်တော့ သူပြီးသွားသလို ကွန်ေတော်လည်း ပြီးသွားတယ် ။ သူနှင့်အတူထိုင်ရက်နှင့် မှိန်းကာ အမောဖြေလိုက်ကြတယ် ။ အမောပြေလာတော့ ဒေါ်မြင့်က မောင်လေးက တကယ်ဆရာကြီးဘဲ လို့ပြောလာတယ် ။ သူက ပက်လက်လှန်ကာ လှဲချလိုက်တော့ သူ့ရဲ့ပူစီက နေထွက်လာသုတ်ရည်တွေကို ဘေးကနေ အဝတ်နှင့် သုတ်ပေးလိုက်တယ် ။ သူက ကျေနပ်အားရစွာနှင့် ငြိမ်ပြီးတော့ ကြည့်နေတယ် ။
အကုန်သုတ်ပြီး သွားမှ ကျွန်တော်လည်း ရေချိုးခန်းကို ဝင်ကာ ရေဆေးပြီး ထွက်လာခဲ့တယ် ။ သူက အိပ်ရာကနေ ထလာပြီး ရေချိုးခန်းကိုဝင်ကာ ဆေးကြောတယ် ။ သူနှင့်အတူ ထမင်းစားခန်းထဲကိုဝင်ကာ ရေခဲသေတ္တာထဲက ဘီယာယူပြီး တစ်ယောက်တစ်ဘူး သောက်ကြတယ် ။ သူက သောက်ရင်းနှင့် ကျွန်တော့ ကိုကြည့် ပြုံးလိုက်ပြီးမှ မောင်လေးက တစ်ခါမှမလုပ်ဘူးလို့ တော်ေ သးတယ် နို့မိုဆိုရင် မမက ဘယ်လောက်တောင် ကောင်းမလဲ မသိဘူး လို့ ပြောလာတယ် ။ သူနှင့်အတူ ဘီယာကုန်တော့မှ သူ့အခန်းဆီကို ပြန်သွားလိုက်ကြတယ် ။ ကဲ မောင်လေး မမကို နောက်တစ်ခေါက်ပြုစုပေးကွယ် လို့ ပြောကာ ကုတင်ပေါ်မှာ ပက်လက်နေပေးတယ် ။ ကိုအေးမောင် ပြောတဲ့စကားကို နားထဲမှာ ကြားယောင်လာတယ် ။ သူက သူတို့ရဲ့ လိုအင်ကို မင်းကအကောင်းဆုံး ပြုစုပေးလိုက် မင်းက ငွေကို ပြောစရာမလိုဘဲ သူတို့က ပေးလာလိမ့်မယ် ကျွန်တော်လည်း ကိုအေးမောင်ပြောသလိုဘဲ ဘွားတော်ကြီးရဲ့ လိုအင်ဆန္ဒကိုဖြည့်ဖို့ ကုတင်ပေါ်ကို တက်သွားကာ သူ့ရဲ့နို့ကနေစပြီး တစ်လု့းကို သွားနှင့်မနာအောင် ဖွဖွလေးကိုက်ကာ စုပ်ပေးတယ် ။ နောက်တစ်ဘက်နှင့် နို့နစ်လုံးကို လက်ညိုး လက်မသုံးကာ ချေပေးလိုက်တယ် ။
အိုး..မောင်လေးရယ် ကျွတ်..ကျွတ်. လို့ ညီးသံလေးထွက်လာတယ် ။ နို့ကြီးနှစ်လုံးကို ပြုစုတာ ရပ်ပေးပြီးမှ သူ့ရဲ့ ပူစီလေးဆီကို ဆင်းသွားတယ် ။ သူ့ရဲ့ပူစီလေးထဲကို လက်ညိုးလေးထိုးသွင်းပြီး အစေ့လေးကို သွားနှင့်မနာအောင်ကိုက်လိုက် နုတ်ခမ်းနှင့်ဆွဲကာစုပ်ပေးလိုက်တော့ မောင်လေးရယ်.. အရမ်းထိတယ မောင်လေးရယ် လုပ်ပေးတော့ လို့ အသံထွက်လာတော့မှ ကျွန်တော့ရဲ့ ဒေါသထွက်နေတဲ့ ညီလေးကို သူလိုချင်နေတဲ့ ကျင်းထဲကို ဖြည်းဖြည်းချင်းဘဲ သွင်းပေးလိုက်တော့တယ် ။ သူ့ရဲ့အပေါ်စီကနေ သူ့ကို စိုက်ကြည့်ပြီး အားနှင့် တစ်ချက်ချင်းဆောင့်ကာ မမ ကြိုက်လား..မောင်လုပ်ပေးတာကို လို့ မေးကာ ဆောင့်ပေးတယ် ။သူက ကောင်တာမှ ဆွေမျိုးမေ့ဘဲ မောင်လေးရယ် ဒီိုးလုပ်ချင်တာ * လို့ ဖြေကြားလာတယ် ။ ကျွန်တော်လည်း သူအပေါ်ကနေ လက်ထောက်ကာ လုပ်နေရာမှ ထိုင်ပြီူး့ရဲ့နို့တစ်လုံးကို ကိုင်ပြီးချေပေးသလိုဘဲ သူ့ရဲ့ညီမလေးရဲ့အစေ့လေးကို လက်မနှင့်ဖိဖိကာ ချေပေးလိုက်တော့ သူက ကြွကြွကာ အမလေး..မောင်လေးရယ်.. အရမ်းထိတယ် ကွာ.. အား..ကျွတ်..ကျွတ် ကောင်းလိုက်တာကွယ် မောင်လေး.. မြန်မြန်ဆောင့်လုပ်ပေးပါကွယ် လို့ ပြောတော့ သူ့ရဲ့ခြေနှစ်ချောင်းကို ပခုံးမှာတင်ပြီး သူ့အပေါ်ကနေ လက်ကို ထောက်ကာ မြန်မြန်ဆောင့်လုပ်ပေးလိုက်တော့ သူပြီးသွားတယ် ။
သူပြီးတော့ ခဏ္ဏစိမ်ထားကာ မလုပ်ဘဲ သူအမောပြေအောင် စောင့်ပေးလိုက်တယ် ။သူ့ရဲ့အသက်ရှူသံတွေ ပုံမှန်ဖြစ်မှဘဲ သူ့ကိုခြေနှစ်ချောင်းကို ခါးမှာတင်ပြီးတော့ ဖြည်းဖြည်းချင်းလုပ်ပေးလိုက်တယ် ။ သူရဲ့မျက်လုံးလေးက မှိတ်ထားပြီး အား..ရှီး.. ကျွတ်..ကျွတ်.. လို့ ပြန်ပြီးတော့ ညီသံလေးထွက်လာတယ် ။ သူက မျက်လုံးပွင့်လာပြီး ကျွန်တော့ ကို တွန်းလှပြီး အပေါ်ကနေ ခွကာ ထိုင်ချလိုက်ပြီး မြန်မြန်ရှေ့တိုးနောက်ဆုပ် လုပ်တော့တယ် ။ ကျွန်တော်လည်း အောက်ကနေ သူ့နို့တွေကို ချေပေးပြီး နေပေးလိုက်တယ် ။ သူက အပေါ်ကနေ အချိန်ကြာကြာလေး လုပ်ပြီးမှ ကိုယ်လေးနိမ့်ဆင်းလာကာ မောင်လေး.. မမပြီးချင်လာပြန်ပြီကွယ် လို့ပြောလာတော့ သူ့ရဲ့တင်ပါးကို နည်းနည်းကြွစေပြီး အောက်ကနေ သူ့ကို ပင့်ကာမြန်မြန်ကြီး ဆောင့်လုပ်ပေးလိုက်တယ် ။သူပြီးသွားမှဘဲ နောက်ထပ် အချက် ၂၀ ဆောင့်လုပ်ပြီး ကျွန်တော်လည်း ပြီးသွားတယ် ။ သူက ကျွန်တော့ရဲ့အပေါ်မှာ မှိန်းကာနေပြီး အမောဖြေနေတော့တယ် ။ သူလည်း အမောပြေတော့ ကျွန်တော့ကို ငွေ ပေးကာ ပါးကိုနမ်းတယ် ။ ကျွန်တော်လည်း ဒေါ်မြင့်ကို လုပ်ပေးပြီး ၅ ရက်လောက် အနားယူကာ နေလိုက်တယ် ။
ကိုအေး မောင်က ကျွန်တော့ကို လိပ်စာကဒ်လေးတစ်ခုပေးကာ သွားခိုင်းပါတယ် ။ သူပေတဲ့နေရာ မြောက်ဒဂုံက လုံချင်းအိမ် တစ်ခုဆိုတာကို သိလိုက်ရတယ် ။ သူက ကျွန်တော့ကို ကြည့်ပြီးတော့ ညီလေး ဒီစော်ကြီးက အရမ်းထန်တယ် မင်းကို သူလိုချင်သလိုမျိုး နေခိုင်းပြီး သူကဘဲ ဦးဆောင်လိမ်မယ် လို့ ပြောပြီး သူက အပြင်ကို ထွက်သွားတယ် ။ ကျွန်တော်လည်း သူပေးတဲ့ လိပ်စာအတိုင်းဘဲ မြောက်ဒဂုံကို သွားလိုက်တော့တယ် ။ အိမ်ရှေ့တံခါးကနေ ဘဲလ်တီလိုက်တော့ ခဏ္ဏအကြာ တံခါးလာဖွင့်ပေးတယ် ။ ဒေါ်သူဇာအိမ် ဟုတ်ပါတယ်နော် လို့ မေးတော့ ပြုံးပြီး ဟုတ်တယ်မောင်လေး မမပါဘဲ လို့ ပြောလာတယ် ။ ကျွန်တော်က ကိုအေးမောင် လွတ်လိုက်တာပါ ပြောတော့ သူက မောင်လေးမမနောက်ကို လိုက်ခဲ့ လို့ ပြောကာ အေ့ရှကနေ အိမ်ထဲကို ဝင်သွားတယ် ။ ခန္ဒာကိုယ်အချိုးစားက အပြစ်ပြောစရာမရှိဘူး ။ ရုပ်ရည်ဆိုရင်လည်းဘဲ တော်တန်ရုံမင်းသမီးကို သနားတယ်လို့တောင် ပြောလို့ရတယ် ။
အိမ်ထဲရောက်မှ နောက်လှည့်ကာ ပြုံးပြတယ်။ ကျွန်တော်ဝင် ပြီးတာနှင့် တပြိုင်နက် တံခါးကို,ဆွဲပိတ်လိုက်တယ် ။ အပြင်မှာပူလောင်မူတွေရှိပေမဲ့ အိမ်ထဲမှာ အားယားကွန်ကြောင့် အေးနေတယ် ။ သူက ကျွန်တော့ကို ကြည့်ပြီး ပြုံးကာ မောင်လေး ခဏ္ဏစောင့်နော် မမရေချိုးပြီးမှ မင်းချိုးပေါ့ လို့ ပြောကာ အိမ်နောက်ကို ဝင်သွားပြီး ကျွန်တော့အတွက် ဘီယာပုလင်းတစ်လုံးချပေးကာ အိမ်အတွင်းခန်းကို ဝင်သွားတယ် ။ စိတ်ကနေပြီး လှလိုက်တာ မမရယ်လို့ ပြောမိတယ် ။ ကိုအေး မောင်ကိုလည်း စိတ်ကနေ ကျေးဇူးတင်မိတယ် ။ အပြင်မှာ ရိုးရိုးသားသားနှင့်နေရင် ဒီလိုမိန့်မမျိုးရဲ့ အနားကို ကပ်ခွင့်တောင်ရနိုင်မှာ မဟုတ်လို့ဘဲ ။ သူချပေးတဲ့ ဘီယာပုလင်းကို သောက်ပြီးတော့ စိတ်ကိုငြိမ်အောင်ထိန်းကာ မျက်လုံးမှိတ်ကာ နေလိုက်တယ် ။သူကပြုံးပြီး မောင်လေး သောက်ပြီးရင် ရေချိုးလိုက်တော့လေ ပြောတော့ ဟုတ်ကဲ့လို့ ပြောပြီး လက်ကျန်ဘီယာလေးကို မော့ကာ ရေချိုးခန်းထဲကို ဝင်လိုက်တယ် ။ ပြီးမှ ဘေးကနေ ရေသုတ်ပဝါကို ပတ်ပြီး မမရှိရာအခန်းကို ဝင်သွားလိုက်တယ် ။ သူက ကုတင်ပေါ်ကနေ ထမိန်ရင်သျှားနှင့်စောင့်နေတော့ သူရဲ့အရှေ့မှာဘဲ ရပ်နေမိတယ် ။ သူက ကျွန်တော့ကို စိုက်ကြည့်ပြီးတော့ လက်နှင့် မျက်နှာသုတ်ပဝါကို ဖြေချဖို့ အချက်ပြတော့လကျွန်တော်လည်း ချွတ်လိုက်တယ် ။ နဂိုကတည်းက သူ့ရဲ့အဝတ်တွေဖုံးထားတဲ့ဘော်ဒီကို မြင်တာတောင် ငပဲကမနေနိုင်တာ သူက ထမိန်ရင်သျှားနှင့်ဆိုတော့ ညီလေးက ခေါင်ထောင်နေတာပေါ့ ။ သူကညီလေးကို ကြည့်ပြီး ပြုံးကာ မင်းလည်း အလာကြီးပါလားကွ လို့ ပြောပြီး သူ့ဆီလာဖို့ လက်ညိုးလေးကိုကွေးချည် ဆန်ချီပြတော့ သူ့ရှိရာကုတင်ပေါ် သွားလိုက်တော့တယ် ။
ကုတင်ပေါ်ရောက်တော့ သူက ထမိန်လေးကို ချွတ်ချကာ ပက်လက်အနေထားနေပေးတယ် ။ လူဘဲလှတာမဟုတ်ဘူး သူ့ရဲ့ပူစီလေးကလည်း အရမ်းကိုလှတယ် ။ နုတ်ခမ်းသားတွေက နည်းနည်းမဲပေမဲ့ ခုံကာဖောင်းကြွပြီး ခုန်ထွက်သွားမဲ့အတိုင်းကို ဖြစ်နေတယ် ။ ကျွန်တော်လည်း သူ့ရဲ့ပေါင်ကြားထဲကို ခေါင်တိုးဝင်ပြီး သူ့ရဲ့ပူစီကို,အနီးကပ်ကြည့်ပြီး ပါးစပ်တစ်ခုလုံးငုံကာ ဆွဲကာစုတ်ပြစ်လိုက်တယ် ။ အိုး.. ဆိုပြီး ညီသံလေးထွက်လာတော့ စိတ်တွေ ပိုပြီးကြွသွားတယ်။ သူ့ရဲ့နုတ်ခမ်းသားနှစ်ခုကို လက်နှင့်ဖြဲပြီး နီရဲနေတဲ့ သူ့ရဲ့အတွင်းသားထဲကို လျှာဝင်နိုင်သမျှသွင်းပြီးပတ်လည်မွေပေးလိုက်တယ် ။ အိုး..ရှီး..မောင်လေး..ရယ်.. လူသစ်သာဆိုတယ် .. အား.. လို့ ညီပြီး စကားသံဆက်ပြီး မထွက်တော့ဘဲ သူ့ရဲ့လက်က ဆံပင်တွေကို လက်နှင့် ပွတ်သပ်ပေးလာတော့တယ် ။ ကျွန်တော်လည်း သူ့ရဲ့အစေံ လေးကို ဆွဲစုတ်ပေးကာ လက်ညိုးလေးကို အသွင်းအထုတ် လုပ်ပေးလိုက်တော့ သူ့ဆီကနေပြီး အရည်တွေ ပန်းထုတ်ပြီး ပြီးသွားကာ အသက်ပြင်းပြင်းရှူသွင်းပြီးနေတော့တယ် ။ ထကာထိုင်ပြိး သူ့ရဲ့ကျေနပ်အားရမူကို တစိမ့်စိမ့်ကြည့်နေမိတော့တယ် ။ သူက အမောပြေသွားမှ ပြုံးကာ ကောင်းလိုက်တာ မောင်လေးရယ် မင်က လူသစ်သာဆိုတယ် မမတော့ မြောသွားတာဘဲကွယ် ဟင်း.. အရမ်းလုပ်တတ်တယ် လို့ ပြောကာ သူဆီကနေ တုံ့ပြန်လာတဲ့အနမ်းကို ကျွန်တော်လည်း မက်မောစွာဘဲ နမ်းရိုက်ပြီး ခံယူလိုက်ပါတော့တယ် ။
သူနှင့်အတူနမ်းရာမှရပ်ပြီး သူ့ကိုလပြန်ပြီးလှဲချကာ ကျွန်တော်က အပေါ်ကနေ သူ့ရဲ့နို့တွေကို စို့ကာ ချေပေးလိုက်တယ် ။ နို့ကို ဘသွားနှင့်မနာအောင် ကိုက်ကာ စိုပေးတော့ သူ့က လုပ်ပေးပါတော့ မောင်လေးရယ် မမအရမ်းလိုချင်ပြီကွယ် * ပြောမှဘဲ ကျွန်တော်လည်း ညီလေးကို သူ့ရဲ့ပူစီလေးဆီမှာတေ့ပြီး ဖြည်းဖြည်းချင်း အဆုံးထိ ရောက်အောင် သွင်းပေးလိုက်တယ် ။ အိုး..မောင်လေးရယ် လို့ ညီးရင်းနှင့် လက်မောင်နှစ်ဘက်ကို သူ့ရဲ့လက်ချောင်းတွေနှင့် တင်းတင်းညှစ်တယ် ။ ကျွန်တော်လည်း သူ့ရဲ့မျက်လုံးလေးမှေးကာ အိုး..မောင်လေးရယ် လို့ ပြောကာ ညီးသံလေးကြားတိုင်မှာ ထိန်ချုပ်လို့ မရဘူး ဖြစ်လာတယ် ။ သူက အား..မောင်လေးရယ်..အား..ကျွတ်..ကွှတ်.. မမပြီးတော့မယ်.. မြန်မြန်.. ပြောတော့မှ ကျွန်တော်လည်း သူ့ကဲ့နို့နှစ်လုံးကို ဆုပ်ကိုင်ပြီး မြန်မြန်ဘဲဆောင့်ကာ လုပ်ပေးလိုက်တော သူပြီးသွားတယ် ။ ကျွန်တော်လည်း နောက်ထပ် ၅ ချက် ဆောင့်လုပ်ပြီး ညီလေးကို ထုတ်ကာ သူ့ရဲ့ဗိုက်ပေါ်မှာဘဲ ပန်းချလိုက်တော့တယ် ။ သူရဲ့ဘေးမှာ လှဲချလိုက်ကာ အမောပြေရင်း မှိန်နေလိုက်တော့တယ် ။ သူရဲ့ဘေးမှာမှိန်းကာ အမောဖြေတာက နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်နေသလိုဘဲဗျာ ။ နှစ်ယောက်သားအမောပြေတော့မှ သူက မောင်လေး..မမလည်း ဒီလိုမျိုး အပြင်လူနှင့် မနေဖူးဘူးကွ လို့ ပြောကာ ကျွန်တော့ပါးကို နမ်းလာတယ် ။ သူကျွန်တောကို ကြည့်ပြီး ပြုံးကာ ကုတင်ပေါ်ကနေ ဆင်းသွားတယ် ။
သူကုတင်ဘေးကနေ ဘီဒိုဖွင့်ကာ ဆေးကတ်လေးကို ယူကာ သူတစ်လုံးသောက်ပြီး ကျွန်တော့ကို တစ်လုံးပေးတယ် ။ ကျွန်တော်လည်း သူပေးတဲ့ဆေး သောက်လိုက်ပြီး သူက အပြင်ကို ခေါ်သွားပြီး ရေခဲသေတ္တာထဲကနေ ဘီးယာတစ်ဘူးနှင့် ဝိုင်ပုလင်းထုတ်ကာ ဘီယာကို ကျွန်တော့ကိုပေးတယ် ။ သူက ဝိုင်ပုလင်းကနေ တစ်ခွက်ငှဲ့ကာ ချီးယားတိုက်ပြီးတော့ နှစ်ယောက်သား တစ်ယောကိကို တစ်ယောက်စိုက်ကြည့်ပြီးကာ သောက်လိုက်ကြတယ် ။ ပြီးတော့မှ နှစ်ယောက်သားအတူ အိပ်ခန်းကို သွားလိုက်ကြတယ် ။ ကုတင်ပေါ်ရောက်တော့ ကျွန်တော့ကိုစိုက်ကာ ကြည့်ပြီးတော့ ဒီတစ်ကြိမ် မမရဲ့အထဲမှာဘဲ ပြီးနော်မောင်လေး လို့ ပြောကာ ပက်လက်အနေထားနေပေးတယ် ။ သူ့ရဲ့နို့တွေကိုစို့ပြီး သူရဲ့ဗိုက်ကိုပါ နမ်းတော့ တီချူလေးနှင့်သုတ်ပေမဲ့လည်း အနည်းငယ် ကပ်ကာကျန်တဲ့ ကျွန်တော့ရဲ့ အကည်တွေက လျာမှာကပ်ညှိသွားသေး ။ ဆက်ပြီးဆင်းကာ သူ့ရဲ့ညီမလေးကို ဦးတည်လိုက်တယ် ။ သူရဲ့အစေ့ကို သွားနှင့် မနာအောင်ကိုက်ပြီး လက်နှစ်ချောင်းကို ဖြည်းဖြည်းချင်းအသွင်း အထုတ်လုပ်ပေးလိုက်တယ် ။
အား..ကျွတ်..ကျွတ်..မောင်လေးရ လို့ညီးသံလေး ထွက်လာပြီး သူ့အပေါ်ကို ကောက်အောင် ကျွန်တော့ရဲ့ ခေါင်းကို လက်နှင့်ဆွဲယူကာ နမ်းပေးတယ် ။ အနမ်းကိုရပ်ပြီးတော့ ချစ်ပေးတော့မောင်လေး.. လို့ သူဆီကနေ ကျွန်တော့ကိုစိုက်ကြည့်ပြီး ပြောလာတော့တယ် ။ ကျွန်တော်လည်း သူ့ကို ခေါင်ညှိတ်ပြလိုက်ပြီး သူ့ရဲ့အပေါ်ကနေ လက်ထောက်ချပြီး ညီလေးကို လက်နှင့်ကိုင်ကာ သူ့ရဲ့ညီမလေးဆီမှာ တေ့ပြီး ဖြည်းဖြည်း သွင်းပေးလိုက်တယ် ။ ပထမအကြိမ်မှာ စီးပြီးတင်ကျပ်နေတဲ့ညီမလေး အခုတော့ အရည်တွေရွဲပြီးတစ်ခါလုပ်ထားလို့ သိပ်မကျပ်တော့ပေမဲ့ နည်းနည်းလေးကျပ်ကျပ်တည်းတည်း ဝင်သွားတယ် ။ သူ့ဆီကနေ အား..ရှီး..မောင်လေးရယ် လို့ ညီသံလေး ထွက်လာတော့တယ် ။ သူဆီကနေ ကျေနပ်အားရတဲ့အသံကို မျှော်လင်နေတဲ့သူမို့ သူ့ရဲ့ညီးသံကြားမိတိုင်မှာ ကျွန်တော်လည်း အရမ်းကို ကျေနပ်မိနေတယ် ။ သူ့ကို အချစ်ဦးလိုသဘောထားကာ သူ့ညီကနေညီးသံလေးကို နားထောင်ပြီး သူ့ကို ညှင်သာစွာဘဲ လုပ်ပေးလိုက်တယ် ။ ၁၀မိနစ်ကို ဖြည်းဖြည်းချင်း အသွင်းအထုတ်လုပ်ပေးတယ် ။ သူက ကျွန်တော့ကာ စိုက်ကြည့်ပြီး အာမောင်လေးရယ်.. မမပြီးချင်လာပြန်ပြီကွယ် လို့ ပြောကာ ကျွန်တော့နောက်ကျော့ကို လက်သည်းတွေနှင့်ကုပ်ကာ ပြောလာတယ် ။ ကျွန်တော်လည်း သူ့ရဲ့နုတ်ခမ်းကို နမ်းပြီး အပေါ်ကနေ ဖိဖိကာ မြန်မြန်ဘဲ ဆောင့်လုပ်ပေးကာ နှစ်ဦးသား အတူတူ ပြီးသွားကြတယ် ။သူ့ပေါ်ကဘဲ ညီလေးကို မချွတ်ဘဲ စိမ်ကာထားပြီး မှိန်းနေလိုက်ရတယ် ။ သူက ကျွန်တော့ကို တင်းတင်းဖက်ထားတာမို့ အဲ့ဒီအတိုင်းဘဲ ငြိမ်ကာ နေလိုက်ရတယ် ။ အဲ့ဒီနေ့က မမကို ငါချီအထိ လုပ်ပေးခဲ့ရတယ် ။ ပထမ တစ်ချီဘဲ အပြင်ထုတ်ပေမဲ့ နောက်လေးချီကတော့ သူ့ရဲ့အထဲမှာ ပြီးခိုင်းတာမို့ သူ့အထဲမှာဘဲ ပြီးခဲ့တယ် ။
ကျွန်တော်ဟာ မမကို ပြုစုပေးပြီး နောက်နေ့မှာ ကိုအေးမောင်က ညီလေး အကို ဒီလိုဘဝမှာ မနေချင်တော့လို့ နေရာသစ်မှာ အေးဆေးနေပြီး ကောင်းရာအလုပ်တစ်ခုကို လုပ်တော့မယ် မင်းလည်း တရင်းတနှီးရရင် အလုပ်နားတော့ အကိုကတော့ နားပြီကွာ နောက်လကစပြီး ဒီအိမ်စရိတ်က မင်းဘဲရှင်းတော့ လို့ပြောကာ နောက်တစ်နေ့မှာ သူရဲ့ ဆင်းကဒ်ကို ကျွန်တော့ကိုပေးပြီး သူအိမ်ကနေ ပြောင်းသွားတယ် ။ သူပြောင်းမဲ့နေရာကို ကျွန်တော့ကို သူက ပြောမသွားသလို ကျွန်တော်လည်း မမေးမိဘူး ။ တစ်ပတ်လုံးဘဲ ကျွန်တော်ဟာ စားလိုက်ဇတ်ကားကြည့်လိုက်နှင့်ဘဲ အချိန်တွေဖြုန်းကာ နေလိုက်တယ် ။ ဖုန်းရိမ်းတုန်းလေး မြည်လာတော့ ကိုင်လိုက်ပါတယ် ။ အမည်ကတော့ မမထားလို့ ရေးထားတယ် ။ ဖုန်းကို ပြန်ထူးလိုက်ပါတယ် ။ ဟိုဘက်ကနေ ခပ်ချေချေနှင့် စကားပြောတယ် ။ မောင်လေး ဒီနေ့ည သင်္ဃကျွ အိမ်ကို မင်းလာခဲ့ပါ မင်းအတွက် ငွေမနည်းစေရဘူး အိုကေလား မောင်လေး ပြောပြီးတော့ ကျွန်တော်ပြန်ပြီး ဖြေချိန်မရလိုက်ဘူး သူက ဖုန်းချသွားတယ် ။ ကိုအေးမောင် အေးဆေး အနားယူသွားတာ ဒီလိုအကြောင်းရာတွေပါလိမ့်မယ် လို့တွေးမိသွားတယ် ။ ကျွန်တော်လည်း ဖုန်းကိုဘေးမှချထားလိုက်ပြီး စားဖိုအတွက် ချက်ပြုတ်ကာ စားသောက်ပြီး တရေးတမော့ အိပ်လိုက်တော့တယ် ။
ညနေဘက်ရောက်တော့ မမထား ဆိုတဲ့ ခပ်ချေချေပြောတဲ့ မိန့်မပြောတဲ့ နေရာကို သွားလိုက်ပါတယ် ။ အဲ့ဒီကိုရောက်သွားတော့ ခြံဝန်းအကျယ်ကြီးရဲ့ အလယ်က အိမ်ကြီးကို သွားတွေ့တယ် ။ အိမ်ကခေတ်ဆန်ဆန်ဆောက်ထားပြီး အဖြူရောင်ကို သုပ်ထားတော့ အိမ်ရှေ့ခြံအပြင်ကနေကြည့်ရင် ခန့်နားနေတယ် ။ ခြံတံခါးဘေးကနေ ဘဲလ်ကိုတီးလိုက်တော့ အသက် ၃၀ ကျော် မိန်မ တစ်ယောက်လာပြီးဖွင့်ပေးတယ် ။ သူ့နောက်နေ လိုက်သွားပြီးတော့ အိမ်ကြီးထဲကို ဝင်လိုက်ပါတယ် ။ အထဲကိုရောက်သွားတော့ မိန့်မကြီး တစ်ယောက် ဆက်တီပေါ်ထိုင်နေတာတွေ့တယ် ။ အိမ်ထဲကိုခေါ်လာတဲ့ မိန်မက မမထားဆိုတာကို အသံကိုခန့်မှန်းမိပြီး ဆက်တီပေါ်က မိန်မကြီး ကိုတော့ ကျွန်တော်မသိဘူး ။ မမထားက ခေါ်ကာ ဆက်တီပေါ်မှာထိုင်ခိုင်းတော့ သူတို့နှင့်အတူဘဲ ဆက်တီပေါ်မှာ ထိုင်လိုက်တယ် ။ မမထား ကျွန်တော့ကို ခြေကနေ ခေါင်းအထိကြည့်ပြီး မောင်လေးရဲ့ဆရာက ဒီအလုပ်ကို မလုပ်တော့ဘူး ဒါပေမဲ့ ရုပ်ရည်ချောချောပြီး ဘော်ဒီ တောင့်တင်းတဲ့ ကောင်လေးတစ်ယောက်လွှတ်ပေးမယ် ပြောတယ်ကွ တကယ်လည်း ချောပါပြီး ဘော်ဒီတောင့်ပါတယ် ဟင်း..ဟင်း.. လို့ ရယ်ကာ ပြောလာတယ် ။
ကဲမောင်လေး ခဏ္ဏအနားယူ ဘာသောက်မလဲ ဘီးယာလား ဝီးစကီလား မေးတော့ ကျွန်တော် ဘီယာဘဲပေးပါ မမ လို့ ပြောလိုက်တော့ သူက အိမ်နောက်ကိုဝင်သွားတယ် ။ သူထွက်လာတော့ စကော့ဝိုင် တစ်ပုလင်းနှင့် ဘီယာဘူးရှည်တစ်ဘူး ဖန်ခွက်နှစ်လုံးပါတယ် ။ သူတို့လည်းသောက် မလိုဆိုတာကို ခန့်မှန်းမိသွားတယ် ။ သောက်ပြီးတော့မှ ရေချိုးခန်းကိုဝင်ပြီး ညီလေးကို ဆေးကြောရင်း ရေပါတစ်လက်စတည်း ချိုးလိုက်တယ် ။ ပြီးမှဘဲ မျက်နှာသုတ်တံဘက်ကို ပတ်ပြီး သူတို့ရှိရာ အခန်းကိုဝင်လိုက်တယ် ။ ခန္ဒာဝဝနှင့်ဘွားတော်က ကုတင်ဘေးက ပက်လက်ကုလားထိုင်ပေါ်မှာ ထိုင်နေပြီး မမထားကတော့ ဂါဝန်အရှည်ကြီးကို ဝတ်ကာ ကုတင်ပေါ်ကနေ စောင့်နေတယ် ။ မောင်လေးလာလေကွယ် လို့ခေါ်တော့ သူရှိရာကုတင်ကို တက်သွားပြီး တံဘက်ကို ဖြေချ လိုပ်ပါတယ် ။ ပက်လက်ကုလားထိုင်ပေါ်က ဘွားတော်က စူးစိုက်ကာ ညီလေးကိုကြည့်နေသလို့ မမထားကလည်း ကြည့်နေတယ် ။မမထားရဲ့ ဂါဝါရှည်ကို ခေါင်းကနေချွတ်ချလိုက်တယ် ။ ဖုဖောင်း ပြီး မောက်တက်နေတဲ့ သူ့ညီမလေးအ ပေါ်ကနေ အမွှေးတိုတိုလေးတွေ ဖုံးအုပ်ထားတော့ သဲသဲကွဲကွဲမြင်နေရတယ် ။ သူ့ကို ပက်လက်လှဲချလိုက်ပြီး သူ့ရဲ့နို့တွေကနေ စပြီးပြုစုပေးတယ် ။ နို့တစ်လုံးကိုစို့ကာ နောက်တစ်လုံးကို ဆုပ်နယ်ကာ နို့သီးခေါင်းလေးကို ချေပေးလိုက်တယ် ။
ကျွတ်ကျွတ်..ကောင်းလိုက်တာ..မောင်လေးရယ် လို့ ညီသံလေးထွက်လာတယ် ။ ကျွန်တော်လည်း သူ့ရဲ့နို့ကိုစို့ပြီး ဖြည်းဖြည်းချင်းဆင်လာကာ ချက်ပေါက်တစ်ဝိုက်ကို လျှာဖျားလေးနှင့် စက်ဝိုင်းလေးဝိုင်းပေးတယ် ။ သူ့ရဲ့ညီမလေးကို လက်ခလယ်လေးနှင့် အကွဲကြောင်းလေးကို အထဲကိုမသွင်းဘဲ အပေါ်ယံကို ပွတ်ကာဆွဲ ပေးလိုက်တယ် ။ အား.. ရှီး.. မောင်လေးရယ် လို့ ညီသံတွေက ဆက်တိုက်ကို ထွက်လာတော့တယ် ။ လက်ကိုဖယ်ပြီး သူ့ရဲ့ညီမလေးကို လျှာဖျားလေးနှင့် ပြုစုပေးလိုက်တော့ သူကအကည်တွေထွက်ပြီးပြီးသွားတယ် ။ သူက ထကာထိုင်လိုက်ပြီး မောင်လေး.. မမကို ချစ်ပေးပါတော့ကွယ် မမ မနေနိုင်တော့ဘူး လို့ ပြောလာတော့တယ် ။ ကျွန်တော်လည်း သူ့ကို ပြန်ပြီးလှဲချကာ သူ့ရဲ့ညီမလေးဆီမှာ ညီလေးကိုတေ့ကာပွတ်ဆွဲတော့ ခည့်လိုက်တော့ကွယ် မောင်လေးရယ် လို့ ပြောလာတော့ ဖြည်းဖြည်းချင်းနှင့်သွင်းပေးလိုက်တယ် ။ ညီလေးက သူ့ရဲ့ ညီမေလေးအထဲကို တစ်ရစ်ရစ်နှင့်တို့းဝှေးပြီး ဝင်သွားတယ် ။ အဆုံးထိကို ကောက်သွားမှ အိပ်ရာခင်းကိုလက်နှင့်ဆုပ်ကိုင်ကာ နုတ်ခမ်းကိုက်ထားတာရပ်လိုက်ပြီး အား..ကျွတ်..ကျွတ်..မောင်လေးရယ် လို့ ညီးလာတယ် ။
ကျွန်တော်လည်း ညီလေးကို ပြန်ပြီးဖြည်းဖြည်းထုတ်ကာ ဖြည်းဖြည်းပြန်သွင်း ၅ ခါ လုပ်ပေးပြီးမှ မနှေးမမြန်လေး လုပ်ပေးလိုက်တယ် ။ သူ့ရဲ့နို့ကို ဆုပ်ကိုင် ပြီးချေပေးကာ မနှေးမမြန်လေး လုပ်ပေးလိုက်တော့ အား..မောင်လေး. ညီသံတွေ ဆက်တိုက်ထွက်လာတော့တယ် ။ ကျွန်တော်လည်း ထိုင်ကာ သူ့ရဲ့နို့တွေ အရှေ့အနောက်ပြေးနေတာကို ကြည့်ပြီးတော့ကို စိတ်အာရုံပြောင်းကာ လုပ်ပေးတယ် ။ အနောက်ကနေ နုညံတဲ့နို့နှစ်လုံးလာထိမှ ကုလားထိုင်ပေါ်က ဘွားတော်ရောက်နေတာ သိလိုက်ရတယ် ။ မမထားက သူပြီးချင်လာတော့ အား..ကျွတ်..ကျွတ်..မောင်လေး.. မမပြီေ တာ့မယ်.. မြန်မြန်ဆောင့်ပေး လို့ပြောလာတယ် ။ အရှေ့အနောက်ပြေးနေတဲ့နို့နှစ်လုံးကို ပြန်ပြီးဆုပ်ကိုင်ကာ သူ့ကို မြန်မြန်ဆောင့်ကာ လုပ်ပေးလိုက်တော့ သူပြီးသွားတယ် ။ သူပြီးသွား တော့ ဆက်မလုပ်ဘဲ ညီလေးကိုမထုတ်ဘဲ ကြည့်နေလိုက်တယ် ။
မမထားက မောင်လေး. မမခင်ကိုလည်း လုပ်ပေးလိုက်ပါကွယ် လို့ ပြောလာတော့မှ သူ့ အထဲကနေ ညီလေးကို ထုတ်လိုက်တယ် ။ မမခင်ဆိုတဲ့ ဘွားတော်က ထိုင်နေတုန်းက ကြည့်လိုက်တော့ ဝဝဖြစ်နေတာ အဝတ်အစားမရှိတော့ အဆီတွေနှင့်ကို ဘော်ဒီအတော်လှနေတယ် ။ သူ့ကပက်လက်လှဲပေးတော့ သူ့ရဲ့အုန်းသီးလောက်ရှိတဲ့နို့တွေကို စို့ကာချေပေးပြီး သူ့ရဲ့ညီမလေးဆီကို ဆင်းသွားတော့ အရည်ကြည်လေးတွေ ထွက်နေပြီ သူ့ရဲ့ညီမလေးရဲ့အစေ့ကို သွားနှင့်မနာအောင်ကိုက်ကာ လက်ခလယ်ကို အသွင်းအထုတ်လုပ်ပေးလိုက်တယ် ။ သူက အား..ကျွတ်..ကျွတ်.. မောင်လေး.. မမကို မြန်မြန်သာ ဆောင့်ပေးကွာ လို့ ပြောလာတယ် ။ ကျွန်တော်လည်း နည်းနည်းပျော့သွားတဲ့ ညီလေးကို လက်နှင့် ဂွင်း၅ ချက်ထုပြီးမှ ခုန်ထွက်သွားမလား ဖုဖောင်နေတဲ့ ညီမလေးကို ညီလေးကို သွင်းလိုက်တယ် ။ အကြီးကြီးဖုဖောင်နေတဲ့ညီမလေးက ညီလေးကို စီးပြီးတင်းကျပ်စွာဘဲ လက်ခံတယ် ။ တစ်ချက်သွင်းတိုင်းမှာ ချိုင့်ကာဝင်သွားပြီး ပြန်ထုတ်တော့လည်း မထွက်ရအောင် စွက်ယူပြီးဖုထွက်လာတယ် ။ သူ့ကိူ မနှေးမမြန်လေးနှင့် ဆောင့်လုပ်ပေးတော့ သူဟာ ဘေးကမမထားကို ဆွဲပြီး နုတ်ခမ်းချင်းနမ်းယင်းနှင့် ညီးနေတော့တယ် ။ သူက အနမ်းကိုရပ်ကာ မောင်လေး..မမကို.. မောင်လေးစိတ်ရှိအတိုင်းဘဲ မြန်မြန်ဆောင့်ပေးကွယ် လို့ ပြောလာတော့ ကျွန်တော်လည်း သူ့ရဲပေါင်နှစ်ချောင်းကို ခါးမှာတင်ပြီး သူ့ရဲ့နို့ကိုဆုပ်ကိုင်ကာ မြန်မြန်ဘဲ ဆောင့်လုပ်ပေးလိုက်တယ် ။ သူပြီးသွားတော့ သူ့ရဲ့ညီမလေးက အတင်းဘဲ ညှစ်ညှစ်ကာ စုပ်ယူပေးလာတော့ ညီလေးကို ထုတ်ပြီး သူ့ရဲ့ဗိုက်ပေါ်မှာဘဲ အရည်တွေပန်းလိုက်တော့တယ် ။ ကျွန်တော့လည်း မမခင်ရဲ့ဘေးကိုလှဲချလိုက်ပြီး အမောဖြေနေလိုက်တော့တယ် ။
ရေချိုးခန်းကိုဝင်ပြီး ညီလေးကိုဆေးပြီး ပြန်ထွက်လာခဲ့တယ် ။ မမထားက ပြုံးပြပြီးတော့ မောင်လေး ဘီယာယူအုံးမလား မေးတော့ ဟုတ်ကဲ့ပါမမထား တစ်ဘူး လိုချင်ပါတယ် လို့ ပြန်ဖြေလိုက်တယ် ။ မမထားက ထမိန်တစ်ထည်ယူပြီး ရင်သျားကာ အခန်းအပြင်ကို ထွက်သွားတယ် ။ သူပြန်လာတော့ ရောက်ခါစတုန်းကလိုဘဲ ကျွန်တော့အတွက် ဘီယာတစ်ဘူးနှင့် သူတို့နှစ်ယောက်အတွက် ဝိုင်ယူလာခဲ့တယ် ။ မမခင်က ကျွန်တော်ဘီယာ သောက်နေတာကို ကြည့်ပြီးတော့ မောင်လေးက ဒီအလုပ်ကိုလုပ်တာ ကြာပြီလား မေးတော့ မကြာသေးပါဘူး အခုမှ ၃ ကြိမ်ဘဲ ရှိပါသေးတယ် မမခင် လို့ ပြန်ဖြေလိုက်တော့ မင်းက မမတို့ကို အထာကျကျကို ကိုင်နိုင်တယ်ကွ မမက မင်းက ဒီအလုပ်လုပ်တာ ကြာနေပြီလို့ ထင်ထားတာကွ လို့ ပြောလာတယ် ။ ကျွန်တော်က သူတို့ကို ပြုံးပြပြီး ဗီဒရီု တွေကနေ သင်ထားတာပါ မမ လို့ ပြောပြလိုက်တယ် ။ သူတို့က ဆက်မမေးတော့ဘဲ ဝိုင်ကို ကုန်အောင်သောက်လိုက်ကြတယ် ။ မမခင်က ကျွန်တော့ကို ကြည့်ပြီး မောင်လေး မမတို့က မောင်လေးကိုဘာလို့ ကွန်ဒုံးမပါဘဲ လုပ်ခိုင်းလဲ သိသလား လို့ မေးလာတော့ မသိပါဘူး မမ လို့ဘဲ ဖြေလိုက်တယ် ။ မမခင်က ကျွန်ဒုံးစွပ်ပြီး အလုပ်ခံရတာက ဆီလီကွန်နှင့် လုပ်ထားတဲ့ အတုလိုဘဲ အရသာမရှိဘူးကွ ရယ်ကာ ပြောလာတော့လည်း သုံးယောက်သား ရယ်လိုက်ကြတယ် ။ သောက်ပြီးတော့ သူတို့နှစ်ယောက်နှင့်အတူ အိပ်ခန်းထဲကို ဝင်လိုက်ကြတယ် ။
အခန်းထဲကိုရောက်တော့ အဝတ်စားတွေကို ချွတ်ပြီး ကုတင်ပေါ်ကို တက်လိုက်ကြတယ် ။ မမခင်ရဲ့ နို့ကြီးနှစ်လုံးကို မမထားနှင့်ကျွန်တော်က တစ်ယောက်တစ်လုံးစိုကြတယ် ။ ကျွန်တော်က သူ့ရဲ့ ပူစီကြီးကို လက်ခလယ်သွင်းကာ အတွင်းသားတွေကို မွှေပေးလိုက်တယ် ။ မမခင်က ကျွန်တော့ကိုဘပက်လက်နေခိုင်ပြီး မမထားက ကျွန်တော့မျက်နှာပေါ်မှာ ခွကာထိုင်ပြီး မမထားက သူ့ရဲ့ပူစီနှင့် ညီလေးကို တေ့ကာ ဖြည်းဖြည်းချင်းဘဲ ထိုင်ချလိုက်တယ် ။ မမခင်က ညီလေးအပေါ်မှာ ဖိဖိကာ စကော့ဝိုင်းလှည့်သလိုလှည့်တယ် ။ မမထားရဲ့ညီမလေးကို ကျွန်တော် လျာဖျားလေးကို သွင်းပြီး ဆွဲကာစုတ်ပေးတယ် ။ အိုး..မောင်လေးရယ် မမထားက ညီးသံလေးထွက်လာသလို မမခင်ကလည်း အား.. မောင်လေးရယ် လို့ ညီသံလေးထွက်လာတယ် ။ ကျွန်တော်လည်း မမခင်းကို ပင့်ကာဆောင့် ပေးသလို့ မမထားရဲ့ဖင်ကိုမကာ သူ့ရဲ့အစေ့လေးကို သွားနှင့်မနာအောင် ကိုက်လိုက် စုတ်ပေးလိုက်လုပ်ပေးတယ် ။ မမထားဟာ ကျွန်တော့မျက်နှာပေါ်မှာ အကည်တွေပန်ပြီး ပြီးသွားတယ် ။ သူကဘေးကိုလှိမ်းဆင်းပြီး အမောဖြေနေတယ် ။ ကျွန်တော်လည်း အသက်ကိုဝဝရှုပြီးမှ မမခင်ရဲ့ နို့ကြီးတွေကို ဆွဲကိုင်ကာ အောက်ကနေပငိ့ပြီး ကော်ထိုးပေးလိုက်တယ် ။
မမခင်က အား မောင်လေးရယ်.. ကျွတ်..ကျွတ်. .မမပြီးတော့မယ် အား.. မြန်မြန်ဆောင့်ပေးပါကွယ် လို့ ပြောကာ ဘေးကို လှိမ်းချလိုက်တယ် ။ ကျွန်တော်လည်း သူကို လက်ထောက်စေပြီး ကုန်းပေးထားတဲ့ သူ့ရဲ့တင်ပါးကြီးနောက်ကနေ ညီလေးကို ဆောင့်သွင်းတယ် ။ သူ့ရဲ့ခါးကို ကိုင်ကာ ဆောင့်လုပ်ပေးလိုက်တယ် ။ သူ့ရဲ့တင်ပါးက အသားဆိုင်တွေက တုံခါနေပြီး ဟိုဒီရမ်းနေကြည့်ပြီး တဇွတ်ဇွတ်နှင့် မြန်မြန်ဆောင့်ပေးလိုက်တာ သူပြီးသွားတယ် ။ ညီလေးကိုချွတ်ပြီး ဘေးကနေ တီချုးနှင့်သုပ်ကာ ပက်လက်ကနေ ကြည့်နေတဲ့ မမထားရဲ့အပေါ်ကနေ လက်ထောက်ပြီးတော့ ညီလေးကိုတေ့ကာ ဖြည်းဖြည်းချင်း အဆုံးထိ ရောက်အောင် သွင်းလိုက်တယ် ။ လက်မောင်းကို တင်းတင်းလေးဆုပ်ကိုင်ကာ အား..ကျွတ်.ကျွတ်..မောင်လေး လို့ တစ်ချက်ညီးပြီး အောက်ကနေကော့ကာ ပေးလာတယ် ။ ကျွန်တော်လည်း သူအပေါ်ကနေ လက်ထောက်ရာမှ ထိုင်လိုက်ပြီး သူ့ရဲ့နို့ကို ဆွဲကာဆောင့်လုပ်ပေးလိုက်တယ် ။ အိုး..ကျွတ်..ကျွတ်.. ကောင်းလိုက်တာ..မောင်လေးရယ် လို့ ညီးသံတွေ ဆက်တိုက်ထွက်လာတော့တယ် ။ ၃ မိနစ်အကြာမှာတော့ သူပြီး ချင်လာသလိုဘဲ ကျွန်တော်လည်း ဆက်ပြီးတင်းမခံနိုင်တော့ မြန်မြန်ဆောင့်ကာ လုပ်ပေးလိုက်တော့ သူပြီးသွားတယ် ။ ကျွန်တော်လည်း သူပြီးတာနှင့် ညီလေးကို အပြင်ထုတ်ကာ ဂွင်း ၃ ချက်ထုပြီး အရည်တွေကို မမထားရဲ့ ဗိုက်ပေါ်မှာ ပန်းချလိုက်တယ် ။ သူ့တို့ရဲ့ဘေးကို လှဲချကာ အမောဖြေကာနေလိုက်တယ် ။ မမထားနှင့်မမခင်ကို အဲ့နေ့က နောက်ထပ်တစ်ကြိမ် လုပ်ပေးပြီး မနက်ရောက်မှ ပြန်လာပြီး မနက်စာကို စားပြီး အိပ်လိုက်တယ် ။ နောက်တစ်နေ့ဆေးခန်းကိုသွားကာ သွေးစစ်ပြီး စားသောက်စရာတွေကိုဝယ်ပြီး အခန်းကိုပြန်ခဲ့တယ် ။ စားသောက်တာက အစအားရှိမဲ့အစားအစာကိုရွှေးစားသလိုဘဲ အားဆေးတွေသောက်ကာ ဘော်ဒီလှအောင်လို့ ဂျင်ဆော့ကာ ၅ ရက်လောက် အနားယူလိုက်တယ် ။ သွေစစ်တော့ ရောဂါမရှိတော့ ပိုပြီးတော့ ပျော်ရွှင်ခဲ့ရတယ် ။ ဒီအလုပ်ကိုလုပ်ရင် သွေးစစ်ပြီး အဖြေကိုစောင့်ရတဲ့အချိန်တွေက ရင်တွေခုန်သလား မမေးနဲ့ပေါ့ဗျာ ။ တစ်ပတ်အကြာမှာတော့ မမတယောက် ချိတ်ပေးတဲ့ နေရာကိုသွားတယ် ။ ကိုးမိုင်ထဲက ခြံဝန်းအကျယ်ကြီးနှင့် အိမ်တစ်အိမ်ကို လိပ်စာထဲက နံပါတ်မို့ ခြံတံခါးကနေ ဘဲလ်တီးလိုက်တယ် ။ ခြံတံခါးကို မိန့်ခလေး တစ်ယောက်လာဖွင့်ပေးပြီး မမက အိမ်ထဲမှာ ရှိပါတယ် အကို ပြောပြီး သူက ကျွန်တော့ကို အိမ်ထဲကို ခေါ်သွားတယ် ။ အထဲကို ရောက်သွားတော့ မမဆိုတဲ့အမက ကောင်မလေးကို ငွေပေးပြီးတော့ သစ်ခွပန်းပင်တွေ ဝယ်ခိုင်းလိုက်တယ် ။ ကောင်မ လေးကလည်း မမ ပေးတဲ့ငွေကိုယူပြီး ထွက်သွားတယ် ။
မမက ကျွန်တော့ကိုခြေထောက်ကနေစပြီး ခေါင်းအထိကို စိုက်ကြည့်ပြီမှ ခေါင်းညှိတ်တယ် ။ သူက မမထား က မောင်လေးကို အမွှန်းတင်လွန်းလို့ မမလည်း မင်းနှင့်အတူနေချင်လို့ ချိတ်ခိုင်းလိုက်တာကွ လို့ ပြောလာတော့ ဟုတ်ကဲ့ပါ မမ လို့ ပြန်ဖြေလိုက်တယ် ။သူက မင်းက ဘီယာသောက်တယ် ဆိုလို့ ရေခဲသေတ္တာထဲမှာ ဘီယာဝယ်ထားတယ် မောင်လေး ခဏ္ဏစောင့်နော် ဆိုပြီး အိမ်နောက်ကို ဝင်ကာ ဘီယာတစ်ဘူး ချပေးလာတယ် ။ သူ့ရဲ့လက်မှာဝတ်ထားတဲ့ လက်ကောက်တောင် ကျွန်တော့ရဲ့အရင် အလုပ်မှာ ၁၀ နှစ်လုပ်ရင် မရနိုင်ဘူး ။အခန်းထဲကို ဝင်သွားတဲ့သူ့ရဲ့နောက်ကို ကြည့်မိတယ် ။ အနက်ရောင် ထမိန်အချောသားရဲ့ အောက်ကနေ နိမ့်တုံမြင်တုံလှုပ်ရှားကာ တုံခါသွားတဲ့တင်ပါးကြီးတွေက တကယ်ကို အားရစရာကြီးဘဲ ။ မမထား နှင့် မမခင်ကလွဲလို့ ဝတဲ့သူမတွေ့ရသေးဘူး ။ အခုမမကတော့ နိုင်ငံခြားမင်းသမီးတွေလိုဘဲ ဝတာမဟုတ်ဘဲ ရင်ကြီးကြီး တင်ကြီးကြီးနှင့် ခါးသေးတဲ့အမျိုးစား ဘော်ဒီလှလှကို ပိုင်ဆိုင်ထားတယ် ။ ဒီအလုပ်က ဖောက်သည်တွေရဲ့အတွင်းရေးကို မစပ်စုသင့်ဘူးလေ စည်းအတွင်းကနေ လှုပ်ရှားရတာမို့ ဘာမှ စူးစမ်းကာ မနေတော့ဘဲ ချပေးလာတဲ့ ဘီယာကိုသာ အေးဆေးထိုင်ကာ သောက်နေလိုက်တယ် ။ သူပြန်ထွက်လာတော့မှ ရေစိုကွက်နှင့် ထမိန်က အသားမှာ ကပ်နေတော့ ပိုပြီးတော့ ကျွန်တော်ထင်ထားတာထက် ဆက်ဆီကျနေသေးတယ် ။ ကျွန်တော်လည်း ရေချိုးခန်းကိုဝင်ပြီး ရေချိုးကာ ထွက်လာခဲ့တယ် ။
သူက အဖျော်ရည်တစ်ခုကို သောက်ကာ လှည့်ကြည့်ပြီးမှ မောင်လေးက ထိုင်အုံးမလား မေးတော့ မထိုင်တော့ပါဘူး မမ မမသာ ပြီအောင်သောက်ပါ လို့ ပြန်ပြောလိုက်တယ် ။ သူကလည်း တစ်ငုံစာအဖျော်ရည်ကို သောက်ပြီးသူုရဲ့အခန်းကို နှစ်ယောက်သား ဝင်လိုက်ကြတယ် ။ သပ်သပ်ရပ်ရပ်နှင့် ရေမြုပ်မွေ့ယာကိုခင်းထားတဲ့ကုတင်ကြီးကလည်း အခန်းထဲကနေ ဆီပြီး ကြိုနေသလိုဘဲ အခန်းထဲက မွေးရနံ့တွေကလည်း စိတ်ကိုတစ်မျိုးလန်းဆန်း သွားစေတယ် ။ သူက ကုတင်ပေါ်ကို အဝတ်အစားတွေ ချွတ်ပြီး တက်သွားတယ် ။ ကျွန်တော်လည်း အဝတ်အစားတွေကို ချွတ်ချပြီး သူ့ရှိရာ ကုတင်ပေါ် တက်လိုက်တယ် ။ တစ်ယောက်တက်တိုင်းမှာ တန်ပြန်တုံခါတဲ့ကုတင်ကြီးပေါ် သူ့ကို ပက်လက်ကလေးနေစေပြီး သူ့ရဲ့ညီမလေးကို လက်နှင့်အုပ်ကာ သူ့ရဲ့နို့ ကို အရင်ဆုံးစို့ကာ ချေပေးလိုက်တယ် ။ လက်နှင့်ညီမလေးအကွဲကြောင်းကို ပွတ်သပ်ရာကနေ လက်ကိုဖယ်ကာ သူ့ရဲ့ညီမလေးကို လျာဖျားလေးနှင့်အပေါ်အောက် အကွဲကြောင်းလေးကို ယက်ပေးလိုက်တယ် ။ အိုး.. မောင်လေးရယ်.. လို့ တစ်ချက်ညီးသံလေး ထွက်လာပြီး သူ့ရဲ့လက် က ခေါင်းကဆံပင်တွေကို ပွတ်သပ်ပေးလာတယ် ။
အမွေးတွေကို ပြောင်စင် အောင်ရိတ်ထားတဲ့နေရာကို လက်နှင့်ပွတ်ပေးပြီး သူ့ရဲ့အစေ့လေးကို ပါးစပ်နှင့် ငုံကာပြင်းပြင်းလေးစုတ်ပေးလိုက်တော့ အိုး..ကျွတ်..ကျွတ်..ကောင်း.. လိုက်တာ.. မောင်လေးရယ်.. မင်းက..အား.. မမထား ..အပြောထက်ကို ပိုပြီးတော့ အား..ရှီး.. လုပ်တတ်လိုက်တာကွာ.. အိုး.. လို့ ညီးကာ ဆံပင်တွေ ကို လက်နှင့်မနာအောင်ဆွဲကာ ပြောလာတယ် ။ ကျွန်တော်လည်း သူ့ဆီကနေ ညီးသံတွေကြားလေ ပိုပြီးတော့ ဆက်လုပ်ပေးလေ လုပ်ပေးလိုက်တယ် ။ သူက အား..ရှီး.. မောင်လေး..မမကို.. ချစ်ပေးတော့ကွယ် လို့ ပြောလာတော့မှ ရပ်လိုက်ပြီး သူရဲ့ညီမလေးဆီမှာ ညီလေးကိုတေ့ပြီး ဖြည်းဖြည်းချင်းဘဲ အဆုံးထိ ရောက်အောင် သွင်းပေးလိုက်တယ် ။ အား..ရှီး.. အားရလိုက်တာကွယ် လို့ နုတ်ခမ်းကိုက်ကာ တင်းခံရာမှ ပြောလာတယ် ။ ကျွန်တော်လည်း သူ့ရဲ့ နို့ကိုကိုင်ပြီး ဖြည်းဖြည်းဘဲ လုပ်ပေးလိုက်တယ် ။ သူ့ညီမလေးက အရည်တွေ လိုက်လာတော့မှ မနှေးမမြန်လေး ဆောင့်ကာ လုပ်ေ ပးလိုက်တယ် ။ ကွန်ဒုံးစွပ်ပြီး လုပ်ပေးရတာမို့ အရသာကသိပ်မတွေ့ပေမဲ့လည်း သူ့ကိုစိတ်ကျေနပ် မူအရေးသာ ဦးစားပေးကာ လုပ်ပေးလိုက်တယ် ။ သူရဲ့လက်တွေက သူ့နို့ကို ဆုပ်ကိုင်ထားတဲ့ ကွန်ေတော့လက်ကိုကိုင်ပြီး ဖိကာ ဆုပ်ပေးလာတယ် ။ သူ ကောင်းလာပြီးမို့ အရှိန်နည်းနည်းတင်ကာ ကျွန်တော်လုပ်ပေးလိုက်တယ် ။ မောင်လေး..အား..ကျွတ်ကျွတ်.. မမပြီးချင်လာပြီ.. ပြောတော့သူ့ရဲ့ ခြေနှစ်ချောင်းကို ပခုံးပေါ်တင်ကာ သူ့အပေါ်ကနေ မြန်မြန်ဆောင့်လုပ်ပေးလိုက်တော့ သူပြီးသွားတယ် ။
သူပြီးသွားတော့ အိပ်ရာခင်းကို တင်းတင်ဆုပ်ကိုင်ကာ နုတ်ခမ်းကိုကိုက်ထားတဲ့ အနီရောင်နုတ်ခမ်းလေးလည်း လွတ်သွားတယ် ။ အသက်ကိုပြင်းပြင်း ရှုထုတ်နေတဲ့ ရင်အစုံကလည်း စိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းလွန်းနေတယ် ။ သူအသက်ပုံမှန်ဖြစ်လာတော့မှ မောင်လေးပြီးအောင်လုပ်လေ လို့ ပြောလာတယ် ။ ဟုတ်ကဲ့ပါ မမလို့ ပြောပြီး သူ့ရဲ့အပေါ်ကနေ မှောက်ကာ ဖိပြီး တစ်ချက်ခြင်းဖိကပ်ပြီး ညှောင့်လုပ်ပေးလိုက်တယ် ။ သူရဲ့နီးသံလေး နားမှာကပ်ကာ ညီးလာတော့ ကျွန်တော်လည်း ဘယ်လိုမှတင်းမခံတော့ဘဲ မြန်မြန်ဆောင်လုပ်ကာ ကွန်ဒုံးထဲကိုဘဲ အရည်တွေပန်းလိုက်တယ် ။ သူလည်း နောက်ထပ်တစ်ကြိမ်ပြီးသွားတယ် ။ သူ့ဘေးကို လှဲချလိုက်ပြီး အသက်ကို ဝဝရှူသွင်းကာ နေလိုက်တယ် ။ အမောပြေသွားတော့ ကွန်ဒုံးကို ချွတ်ပြီး ရေချိုးခန်းကိုဝင်ကာ ဆေးကြောလိုက်တယ် ။ ပြီးမှ ရေတစ်ခွက်နှင့်ဆပ်ပြာယူကာ သူရဲ့ညီမလေးကို ဆေးကြောပေးလိုက်တယ် ။ သူက ပြုံးကာကြည့်နေပြီး မောင်လေးကို မမထား ..သဘောကျတာ ဒီလိုမျိုးပြုစုပေးလို့ပေါ့ ပြောလာတယ် ။ ကျွန်တော်ပြုံးပြပြီး ငြိမ်နေလိုက်တယ် ။ သူ့ကို ဆေးကြောပြီးမှ သူကထကာ ရေခွက်ကို ကုတင်ဘေးကခုံပေါ်မှာ တင်လိုက်တယ် ။ ထမိန်အနက်ရောင်ကို ရင်သျားကာ ရေခဲသေတ္တာရှိရာကို ခေါ်သွားပြီး အထဲကနေ ဘီယာတစ်ဘူး ထုတ်ပေးလာတယ် ။ သူပေးတာကို တရိုတသေယူလိုက်တော့ သူကရယ်ပြီး လူကို အရှက်ကုန်အောင် လုပ်ထားပြီး အခုမှ တရိုတသေ ယူတယ် ဟား လို့ ကလေးတစယောက်လိုဘဲ ပေါ့ပါးစွာသူရယ်တော့ ကျွန်တော်လည်း လိုက်ရယ်လိုက်တော့တယ် ။
သူက အဖျော်ရည်မသောက်တော့ဘဲ ကျွန်တော့လိုဘဲ ဘီယာတစ်ဘူးကို ဖွင့်သောက်လိုက်တော့တယ် ။နှစ်ယောက်သား ဘီယာကို ချီယားတိုက်ကာ သောက်လိုက်ကြတယ် ။ မောင်လေး မင်းမှန်မှန်ပြောနော် မောင်လေးရဲ့ အမည်အရင်းက ဘာလဲ လို့ မေးလာတော့ ကျွန်တော်လည်း ခဏ္ဏငြိမ်ပြီးမှ အောင်ဇော်ပါမမ လို့ ပြန်ဖြေလိုက်တယ် ။ သူကလည်း မမရဲ့အမည်က နှင်းသော်တာပါ မှတ်ထားနော် ဆိုတော့ ဟုတ်ကဲ့ပါ မမ လို့ပြန်ဖြေလိုက်တယ် ။ မင်းက ဘယ်မှာနေတာလဲ မေးတော့ ကျွန်တော်နေတဲ့ လသာက ကျွန်တော်နေတဲ့အခန်းနံပါတ် နှင့် လမ်းကို ပြောပြလိုက်တယ် ။ သူက ခေါင်းညှိတ်ပြီး ဒီလောက်ဆိုရင် မမသိပါပြီကွယ် လို့ ပြောကာလ က်ကျန်ဘီယာကို ကုန်အောင်သောက်လိုက်ကြတယ် ။ မောင်လေး ပြီးရင် မမကို ထပ်ချစ်ပေးပါအုံးကွယ် ပြောပြီး ကျွန်တော့ရဲ့ လက်ကို ဆွဲကာ အခန်းထဲကို ခေါ်သွားတယ် ။ ကုတင်ပေါ်ရောက်တော့ သူက ကျွန်တော့ရဲ့ခေါင်းကိုဆွဲပြီး နုတ်ခမ်းချင်းစတင်ကာ နမ်းပေးလာတယ် ။ သူ့ရဲ့ အနမ်းကိုပြန်လည်တုံ့ပြန်ပြီး လျာလေးသွင်းကာ လျာချင်းထိလိုက်တယ် ။ သူကလည်း ပြန်ပြီး လှာလေးကို ဆွဲကာ စုပ်ပေးပြီး ကျွန်တော့ညီလေးကို လက်နှင့်ကိုင်ကာ ဂွင်းတိုက်ပေးလာတယ် ။ သူကို ပက်လက်လှဲချပြီး သူ့အပေါ်ကနေ အသားချင်းဖိကပ်ကာ နုတ်ခမ်းကိုနမ်းပြီး အောက်ကို ဆင်းလာတယ် ။ သူ့ရဲ့နို့တစ်လုံးကို စို့ကာ နောက်တစ်လုံးကို လက်နှင့်ချေပေးလိုကတယ် ။ ပြီးမှထပ်ပြီး အောက်ကိုဆင်းကာ သူ့ရဲ့ချက်တစ်ဝှိက်ကို လျှာဖျားလေးနှင့်စက်ဝိုင်း သုံးခါဝိုင်းလိုက်တယ် ။
သူ့ညီမလေးကိုလက်နှင့် ပွတ်သပ်ပေးတာကိုရပ်ပြီး အစေ့လေးကို လက်ညိုးလက်မနှစ်ခုနှင့် ချေပေးတယ် ။ လျာကို သူ့ရဲ့ ညီမလေးအထဲထိကို ရောက်အောင်သွင်းကာ လုပ်ပေးလိုက်တယ် ။ အိုး..မောင်လေးရယ် လို့ ညီသံလေးထွက်လာပြီး ကျွန်တော့ကိုအပေါ်က သူ့နုတ်ခမ်းနှင့်နမ်းရအောင် ဆွဲတင်ပြီး နုတ်ခမ်းချင်းနမ်းလာတယ် ။ မောင်လေး မမကို လုပ်ပေးတော့ လို့ ပြောလာတယ် ။ ကျွန်တော်လည်း အိပ်ရာဘေးမှာ ချထားတဲ့ ကျွန်ဒုံးလေးကို လှမ်းယူကာ အိမ်ကို ဖောက်ဖို့လုပ်တော့ သူ့လက်ကတားပြီးတော့ ကျွန်ဒုံးကိုယူလိုက်တယ် ။ မမကို ဒီအတိုင်း ကွန်ဒုံးမပါဘဲ လုပ်ပေးပါ မောင်လေး ပြီးရင် မင်းရဲ့ချစ်ရည်တွေကို မမရဲ့အထဲမှာဘဲ ပန်းပေးပါ လို့ ပြောလာတယ် ။ ကျွန်တော်လည်း ဝမ်းသာအားရစွာနှင့် သူ့ရဲ့အပေါ်ကနေ လက်ထောက်ပြီး ညီလေးကို သူ့ညီမလေးဆီမှာတေ့ပြီး ဖြည်းဖြည်းချင်းဘဲ သွင်းလိုက်တယ် ။ ကွန်ဒုံးနှင့်လုပ်တုန်းက သူ့ညီမလေးရဲ့တင်ကျပ်မူကို အပြည့်အဝမခံရပေမဲ့ အခုလို ပလိန်းလုပ်တော့ သူ့ရဲ့တင်းကျပ်တဲ့ညီမလေးရဲ့ ဆွဲယူမူကိုသိရတယ် ။ သူနှင့်အသားချင်းထိအောင် သူ့လက်ကတင်ကျပ်စွာဖက်ထားပြီးတော့ နုတ်ခမ်း ချင်းနမ်းလာတယ် ။ ကျွန်တော်လည်း ခံစားမူ ရသ အဆုံးထိရောက်သွားသလို ခံစားလိုက်ရပြီး ပြန်ပြီး မပြီးအောင်မနည်းထိန်းလိုက်ရတယ် ။
သူ့ကိုနုတ်ခမ်းချင်းနမ်းဖိဖိပြီး တစ်ချက်ချင်းကို ဆောင့်ဆောင့်ကာ လုပ်ပေးလိုက်တယ် ။ ရေမြုပ်မွေ့ယာကြီးကလည်း ပြန်ပြီးခုန်နေတော့ သိပ်အားမစိုက်ရဘူး ။ သူက အနမ်းကိုရပ်ပြီးတော့ မောင်လေး..အား.. မမပြီးတော့မယ် ပြောလြာတယ် ။ ကျွန်တော်လည်း သူ့ရဲ့နုတ်ခမ်းကို နမ်းပြီး မြန်မြန်ဖိကာ ဆောင်လုပ်တော့ သူပြီးသွားတယ် ။ သူ့ညီမလေးကလည်း ညီလေးကို ရစ်ပွတ်ပြီး ဆွဲကာစုပ်ယူလာတော့ တင်းမထားနိုင်တော့ဘဲ သူ့ရဲ့အထဲမှာ အချစ်ရည်တွေပန်းကာ ပြီးသွားတယ် ။ ပြီးသွားတော့ ဘေးကိုလှိမ့်ပြီး ဆင်းမလို့ ကြံတော့ သူ့ရဲ့လက်မလွှတ်ဘဲ တင်းတင်းဖက်ကာ မောင်လေး.. ဒီအတိုင်းဘဲ နေပါကွယ် လို့ တောင်းဆိုလာခဲ့တယ် ။ ကျွန်တော်လည်း သူပြောတဲ့အတိုင်းဘဲ သူ့အပေါ်ကနေဖိပြီး မှိန်းကာ နေလိုက်တော့တယ် ။ နှစ်ယောက်သား အမောပြေတော့မှ လူချင်းခွာကာ သူ့ရဲ့ညီမလေးအထဲက စီးကျလာတဲ့ အချစ်ရည်တွေကို တီချုးလေးနှင့် သုတ်ပေးပြီးတော့ သူ့ကိုချီကာ ရေချိုးခန်းထဲကို ခေါ်သွားတယ် ။ သူ့ညီမလေးကို ဆပ်ပြာနှင့် စင်ကြယ်အောင်ဆေးကြောပေးပြီး ကျွန်တော်လည်း ဆေးကြောတယ် ။ သူက ရေပန်းကိုဖွင့်လိုက်တော့ နှစ်ယောက်စိုကုန်ပြီး ရေပါတစ်လက်စတည်း ချိုးပြီး တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက် ဆပ်ပြာတိုက်ပေးကြတယ် ။ ရေချိုးခန်းက ထွက်ကာ အဝတ်အစားတွေဝတ်တော့ သူက ကျွန်တော့ကို ပိုက်ဆံတွေပေးလာတယ် ။ သူပေးတဲ့ငွေကို ယူပြီး ကိုယ့်ရဲ့အခန်းကို ပြန်လာခဲ့တယ် ။ အခန်းကို ပြန်ရောက်တော့ ချက်ပြုတ်ပြီး အိပ်ရာပေါ်မှာ ခဏ္ဏမှိန်းနေပြီး ထမင်းစားကာေီဒီ တွေဒေါင်းပြီး ကြည့်နေလိုက်တယ် ။ ဖုန်းရိမ်းမြည်လာတော့ ပြန်ထူးလိုက်တယ် ။ အသံချိုချိုနှင့် မောင်လေး အရမ်းကိုပင်ပန်းသွားလား မမတော့ လူကိုနူးချိနေတာဘဲကွာ လို့ ပြောတော့မှ မနှင်းသော်ဆိုတာ သိလိုက်ရတော့ ဟုတ် မသော်တာ လို့ ပြန်ပြောလိုက်တယ် ။
သူက နောက်ထပ်တွေ့ချင်ကြောင်းပြောပြီး ဖုန်းချသွားတယ် ။ ကျွန်တော်လည်း မနှင်းသော်တာနှင့်လုပ်ပြီးတော့ ၂ ရက်အကြာမှာ အိမ်ထဲမှာ ဇတ်ကားတွေဒေါင်းထားတာကို ကြည့်နေတုန်းမှာ အခန်းတံခါးခေါက်သံ ကြားလို့ ထကာသွားဖွင့်လိုက်တယ် ။ မျက်နှာဝိုင်းဝိုင်းနှင့် မမတစ်ယောက်က မောင်လေး မမတို့အခန်းမှာ ညနေ အလှူလုပ်မလို့ လာခဲ့နော် မမက ဒီအခန်းကပါ လို့ မျက်နှာချင်းဆိုင် အခန်းကိုလက်ပြတယ် ဟုတ်ကဲ့ပါ မမ လို့ ပြန်ပြောလိုက်တယ် ။ သူလည်း အခန်းကိုဝင်သွားမှ ကျွန်တော်လည်း အခန်းတံခါးကိုပိတ်ပြီး ဇတ်ကားကို ဆက်ကြည့်ရင်း အိပ်ပျော်သွားတယ် ။ညနေ ရောက်မှ နိုးလာပြီး ရေချိုးကာ အင်္ကျီအဖြူနှင့် ယောက်ပုဆိုးအပြာရောင်ကို ဝတ်ကာ အလှူအိမ်ကို သွားလိုက်တယ် ။ လူ ၁၀ ယောက်ကျော်သာ ရှိတယ် ။ ကျွန်တော်ဝင်သွားတော့ မျက်နှာဝိုင်းဝိုင်းနှင့်မမက ရောက်လာပြီး မောင်လေး လာကွယ် လို့ ပြောကာ စားပွဲခုံးကို ခေါ်သွားတယ် ။ မုန့်ဟင်းခါးထည့်ပေးတယ်။ျွန်တော်လည်း စားသောက်ပြီးတော့ အိမ်မှာ လူက ၄ ယောက်ဘဲ ကျန်တော့တယ် ။။ မျက်နှာဝိုင်းဝိုင်းနှင့်မမက သူ့ကို သူမိတ်ဆက်တယ် ။ မောင်လေး မမအမည်က စန္ဒာပါ ဒီအခန်းက မမတို့က ပြောင်းလာတာ ၃ ရက်ဘဲ ရှိပါသေးတယ် ပြောတော့ ကျွန်တော်ကလည်း ဟုတ်ကဲ့ပါ မမ အကူညီလိုရင် ကျွန်တော့ ကိုပြောပါ လို့ လောကဝတ်ချီကာ ပြန်ပြောလိုက်တယ် ။ သူကလည်း အကူတောင်းမှာ စိတ်ချပါ မောင်လေး လို့ ရယ်ကာ ပြောလာတယ် ။
သူက သူ့အခန်းက သူငယ်ချင်း မအေးအေးနွယ်နှင့် မိတ်ဆက်ပေးတယ် ။ သူ့အခန်းကပြန်လာတော့ ကျွန်တော်လည်း ဖေ့ဘွတ် ဖွင့်ကာ ကြည့်ပြီး အိပ်လိုက်တယ် ။ နောက်နေ့မနက်မှာ ဈေးသွားတော့လည်း သူနှင့်အတူသွားဆုံတယ် ။ သူနှင့်အတူ ဈေးကအပြန်မှာ လ္ဘက်ရည်ဆိုင်မှာ လ္ဘက်ရည်အတူသောက်ကာ စကားအနည်းငယ်ပြောပြီး ပြန်ခဲ့တယ် ။ ကျွန်တော်လည်း ချက်ပြုတ်ပြီး ဝရန်တာထွက်ကာ အောက်ကသွားလာနေသူတွေကို ကြည့်လိုက်တော့ အနက်ရောင်ထမိန်စကပ်ကို တင်းတင်းဝတ်ပြီး အင်္ကျီအဖြူရောင်တီချပ်ဝတ်ကာ အလုပ်သွားတဲ့ မစန္ဒာနှင့်မအေးအေးနွယ်တို့ အလုပ်သွားတာကိုမြင်လိုက်တယ် ။ ကျွန်တော်လည်း ဒီအလုပ်ကို လုပ်ပြီးတဲ့နောက်မှာ အသက်ငယ်ငယ် ကောင်မလေးတွေထက် ကိုယ့်ထက်အသက်ကြီးတဲ့ မမတွေကိုဘဲ စိတ်ဝင်စားလာတော့တယ် ။ အခန်းထဲကို ပြန်ဝင်ပြီး ရေချိုးကာ ရေသုတ်နေတုန်းမှာ တံခါးခေါက်သံကြားလို့ ဖွင့်လိုက်တော့ မသော်တာက ပြုံးပြီး အခန်းထဲကို ဘာမှမပြောဘဲ ဝင်သွားတယ် ။ ကျွန်တော်လည်း တံခါးပိတ်ပြီး သူ့နောက်ကို လိုက်သွားတယ် ။
မသူဇာအိမ်ကိုရောက်သွားတော့ မသူဇာက ဆက်တီပေါ်မှာထိုင်နေရာမှ ထလာတယ် ။ ပြုံးပြပြီး ဘယ်လိုလဲ အဆင်ပြေရဲ့လား သော် လို့ မေးတော့ မသော်တာက အင်း. ဟား..ဒို့က အဆင်ပြေတာမှ သိပ်ပြေပါရှင့် လို့ ပြောကာ ရယ်လိုက်တယ် ။ သူတို့နှစ်ယောက်နှင့်အတူ ဆက်တီပေါ်မှာ ထိုင်လိုက်တော့မှ မသူဇာက သူတို့သူငယ်ချင်း သုံးယောက်အကြောင်းကို ပြောပြလာတယ် ။ မသူဇာက လူကြီးတစ်ယောက်ရဲ့ တိတိပုန်းမယားအဖြစ်နှင့် ငါးနှစ်နေပြီးမှ သူ့ရဲ့မယားကြီးက သိသွားပြီး ငွေတွေပေးကာ ကင်းကင်းနေခိုင်းကြောင်းကို ပြောပြတယ် ။ လူကြီးကလည်း မသူဇာကို ငွေတွေခိုးခိုးပေးကာ သူ့မိန့်မမသိအောင် နှစ်နှစ်ထပ်ပေါင်းပြီး သူတို့နေရာပြောင်းမှ မသူဇာဆီကို မလာတော့တာကို အစအဆုံးပြောပြတယ် ။ သူက လူကြီးဆီကနေရတဲ့ ငွေတွေနှင့် ခြံအရောင်းအဝယ်လုပ်ပြီး အဆင်ပြေလာတယ် ။ ကြေးစားခေါ်ပြီးတော့ အပြတ်ကဲ့ဖို့အတွက် လူရှာတာ ပထမဆုံးကြေးစားက ကျွန်တော်ဖြစ်သွားတယ် ။။ ကျွန်တော်က သူ့ကို စိတ်တိုင်ကျပြုစုပေးပြီးနောက်မှာ တခြားလူကို မစဉ်းစားတော့ဘဲ ကျွန်တော့ကိုသာ သူ့ရဲ့လူအဖြစ် သတ်မှတ်ထားခဲ့တယ်လို့ ပြောလာတယ် ။ မမထား က ယောက်ျားဆုံးပြီး စိန်ပွဲစားအနေနှင့်လုပ်ကိုင်ကာ ကြေးစားကောင်လေးတွေကိုခေါ်ကာ ပျော်ပါးနေသူမို့ ကျွန်တော့ကိုခေါ်ဖို့ မသူဇာနှင့် မသော်တာကို ပြောခဲ့တာလို့ပြောပြတယ် ။ မမထား မှာ သားတစ်ယောက် သမီးတစ်ယောက်ရှိပြီး အိမ်ထောင်တွေ ကိုယ်စီရှိနေတော့ သားသမီးမျက်နှာနှင့် ပေါ်တင်မကဲရဲတာကို ပြောကာ ရယ်လိုက်ကြတယ် ။နောက်ဆုံးမှ မသော်တာက သူ့ရဲ့အကြောင်းတွေကို ပြောပြတယ် ။
မသော်တာက အရမ်းဆင်းရဲတယ် ။ သူ့ ဈေးမှာ အမေနှင့်အတူ ဈေးရောင်းတယ် ။ ဦးအောင်ဆိုတဲ့ အဘိုးကြီးက သူ့ကို ဆေးပေးမီယူအနေနှင့်ပြုစုပေးဖို့ အတွက် တောင်းရမ်းလက်ထပ်ခဲ့တယ် ။ ဆင်းရဲ့တဲ့ မိသားစုကို စိတ်ချမ်းသာဖို့ ယူခဲ့ရတယ် ။ အဖိုးကြီးနှင့် ပေါင်းဖက်ပြီး ၃ နှစ်အကြာမှာ အဖိုးကြီးဆုံးသွားတော့ သူက အသက်ငယ်ငယ်နှင့် မုဆိုးမလေး တစ်ယောက်ဖြစ်လာခဲ့တယ် ။ သူငယ်ချင်းဖြစ်တဲ့ မသူဇာနှင့်ဆုံပြီနောက်မှာ ကျွန်တော်နှင့်ပျော်ပါးပြီး ဒီအဆင့်ကိုရောက်လာခဲ့တယ် ။ မသော်တာက သူ့စကား ဆုံးသွားတော့မှ ကျွန်တော့ကို ကြည့်ကာပြုံးပြတယ် ။ ကျွန်တော်လည်း သူ့ကို သနားသွားတယ် ။ ကျွန်တော့ဘဝကိုလည်း သူတို့ကို ပြောပြတယ် ။ အားလုံးပြီးသွားမှဘဲ မသူဇာအိမ်မှာဘဲ နေဖို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ် ။ ကျွန်တော်လည်း အခန်းကို အိမ်ရှင်ထံမှာ သွားအပ်ပြီး မသူဇာအိမ်ကို ပြောင်းနေလိုက်ကြတယ် ။ မသူဇာရဲ့အိမ် ခြံ မြေ အရောင်းအဝယ်တွေကို သင်ကြားပြီး သုံးယောက်စပ်တူ လုပ်ကြတော့တယ် ။ ဝယ်ထားတဲ့ခြံတစ်ခြံ အရောင်းထွက်တော့ ဘီယာပုလင်းတွေဝယ်ပြီး အိမ်မှာဘဲ သုံးယောက်သားအောင်ပွဲခံကြတယ် ။ နည်းနည်းလေး အရှိန်ရလာတဲ့ မသော်တာက ရေချိုးခန်းထဲကို ဝင်ပြီး ပြန်ထွက်လာတော့ ညီလေးကို ပုဆိုးထဲကနေထုတ်ပြီး စုတ်ပေးတယ် ။ ဘေးကနေထိုင်ကာ သောက်နေတဲ့ မသူဇာက သောက်တာကို ရပိပြီး နုတ်ခမ်းချင်းလာနမ်းတယ် ။
မသူဇာရဲ့နို့တွေကိုချေပေးပြီး နုတ်ခမ်းချင်း နမ်းနေတုန်းမှာ မသော်တာက ညီလေးအပေါ်မှာ တက်ခွကာ ထိုင်ထလုပ်တော့တယ် ။ မသူဇာရဲ့ ထမိန်ကိုဖြေချလိုက်ပြီး သူ့ကို ကျွန်တော့ရဲ့မျက်နှာအပေါ်မှာ ခွကာထိုင်စေတယ် ။ သူ့ညီမလေးကိုခေါင်းမော့ကာ စုတ်ယူပြီး သူ့ရဲ့ခရေဝကို လက်ညိုးနှင့် စက်ဝိုင်းလေး ဝိုင်းပေးလိုက်တယ် ။ အိုး..ညေီသံလေးထွက်လာပြီး မသောတာနှင့် မသူဇာက နုတ်ခမ်းချင်းနမ်း လိုက်ကြတယ် ။ မသော်တာ အပေါ်ကနေ ဆောင့်ချက်တွေကြမ်းလာသလို မသူဇာကိုလည်း ကျွန်တော်က ပြင်းပြင်စုတ်ကာ လက်ညိုးကို ခရေအထဲသိုသွင်းကာ မွှေပေးလိုက်တယ် ။ သူတို့ဆီကနေ ညီသံတွေထွက်လာပြီး မသော်တာက ဆောင့်လုပ်ရင်ပြီးသွားတယ် ။ သူတို့နှစ်ယောက်က နုတ်ခမ်းနမ်းရာမှ နေရာပြောင်းလိုက်ကြတယ် ။ သူဇာက ကျွန်တော့အပေါ်ကနေတက်ကာ ဆောင့်လုပ်ပေးတယ် ။ မသော်ကတော့ ကျွန်တော့ဘေးကနေ လှဲလျောင်းပြီး နုတ်ခမ်းချင်း နမ်းပေးတယ် ။ မသော်ကိုနမ်းနေရင်း မသူဇာက ဆောင့်လုပ်တာမြန် လာပြီး သူကထကာ လေးဘက်ထောက် အနေထားနေပေးတော့ အလိုက်တသိ သူ့နောက်ကနေ သူ့ခါးကိုကိုင်ပြီး ကြမ်းကြမ်းဆောင့် လုပ်ပေးလိုက်တယ် ။ အား..ရှီး..မောင်ရယ်.. မမပြီးပြီကွယ် လို့ ပြောကာ ငြိမ်ကျသွားတယ် ။ ကျွန်တော်လည်း ဆက်ပြီးတင်းမထားတော့ဘဲ အရည်တွေကို မသူဇာအထဲမှာဘဲ ပန်းထည့်လိုက်တော့တယ် ။
သူတို့နှစ်ယောက်လုပ်ပြီး ကြမ်းပြင်ပေါ်ပက်လက်လှဲကာ နေလိုက်တယ် ။ အမောပြေတော့ ကျန်တဲ့ဘီယာတွေကို ဆက်သောက်ပြီး နောက်တစ်ပွဲအတွက် အားကိုမွေးလိုက်ကြတယ် ။အိမ်တစ်အိမ်ထဲမှာ မိန်မနှစ်ယောက်ကို အတူပေါင်းသင်းနေရတော့လည်း အပြင်မှာ ကမ္ဘာစစ်ဖြစ်နေရင် မသိနိုင်တော့ဘူး ။ မမ နှစ်ယောက်ကလည်း အသက် ၃၄ နှစ် ကျွန်တော်က အသက် ၂၀ ဆိုတော့လည်း စဉ်းစားသာ ကြည့်လိုက်တော့ဗျာ ။ အိုးနှစ်လုံးကို ဘယ်လိုဖြိုဖြို မပြိုတဲ့အပြင် ပိုပြီးတော့တောင် တောင်လာသေးတယ် ။ အထူးသဖြင့်က မသော်ပေါ့ တောင့်တင်းတာထက်ကို ပိုပြီးတော့ကို တောင့်ကာ အရမ်းလှလာတယ် ။ ဘီယာလက်ကျန်တွေနှင့်အမြည်းတွေကို စားပြီးတော့ သိမ်းဆည်းကာ အိပ်ခန်းထဲကို သုံးယောက်အတူဘဲ သွားလိုက်ကြတယ် ။ ရေမျောနေတဲ့ဗေဒါ ကမ်းဆိုက်နော့လည်း မြေသြကောင်းတဲ့ကမ်း ဆိုက်ရောက်သွားတယ် ။ အဝတ်စားမပါဘဲ အရှေ့ကနေ လျောက်သွားတဲ့ အယ်နေတဲ့အိုးနှစ်လုံးကို ကြည့်ရင်းနှင့် အရသာခံကာ ကုတင်ပေါ်ကို တက်လိုက်တယ် ။ သုံးယောက်သားဖက်ကာနမ်းကြပြီး မသော်နှင့် မသူဇာကို လေးဘက်ထောက်အနေထားနှင့် နေခိုင်းတယ် ။အရင်းဆုံးမသော်ရဲ့ညီမလေးကို ယက်ပေးလိုက်တယ် ။
နှစ်ခမ်းသားနှစ်လွှာက အနည်းငယ်ထွက်နေတော့ အဲ့ဒီနေရာကိုဘဲ စုတ်ပြစ်လိုက်တာ အား..ရှီး..မောင်ရယ် လို့ ညီးကာ ကော့တက်သွားတယ် ။ သူ့ရဲ့ခါးကို ထိန်းကာ ယက်ပြီးတော့ ပြုစုပေးကာ မသူဇာရဲ့ညီမလေးအထဲကို လက်ညိုးလေးသွင်းကာ လုပ်ပေးတယ် ။ ကျွန်တော်လည်း ညီလေးကိုဂွင်းတိုက်ပြီး မသူဇာရဲ့ညီမလေးဆီမှာ ပွတ်ကာဆွဲပြီး အဆုံးထိ သွင်းလိုက် ညီးကာ ဘေးက မသော်နှင့်အတူ နုတ်ခမ်းချင်းနမ်းကြတယ် ။ သူ့ရဲ့တင်ပါးကြီးကို ဖျစ်ညှစ်ကာ မနှေးမမြန်လေးဆောင့်လုပ်ပေးတယ် ။ သူလည်းညီးရင်း နောက်ပြန် ဆောင့်လုပ်ပေးလာတယ် ။ မသော်တာကို နမ်းတာရပ်ပြီး မောင်..အား..ကျွတ်..ကျွတ်..မမပြီးချင်ပြီ ပြောလာတော့ သူ့ခါးကိုလက်နှစ်ဘက်နှင့်ကိုင်ကာ မြန်မြန်ဘဲဆောင့်လုပ်ပေးလိုက်တယ် ။ သူကလည်း ပြန်ပြီးဆောင့်ပေးပြီး အား..ရှီး..မောင်ရယ်..အား..မောင်..မမပြီးပြီ အား.. ပြောကာ မွေ့ယာပေါ်ကို မှောက်ကျသွားကာ အသက်ကိုပြင်းပြင်းရှူနေတယ် ။ မသော်တာဘက်ကို ပြောင်းပြီးတော့ သူ့ရဲ့ညီမလေးကို ညီလေးနှင့်ပွတ်ကာ ထိုးသွင်းလိုက်တယ် ။ အိုး..ရှီး..မောင်ရယ်.. အား.. ကျွတ်..ကျွတ် လို့ ညီးသံလေး ပေးလာတယ် ။ ကျွန်တော်လည်း ပြီးချင်ပြီးမို့ အား..မသော်.. မောင်..ပြီးတော့မယ် လို့ ညီးရင်းနှင့် မြန်မြန်ဆောင့်လုပ်ပေးတယ် ။ မသေိာကလည်း * အား..ကျွတ်..ကျွတ်..မောင်.. မမလည်း ပြီးတော့မယ် အတူပြီးရအောင်နော် မောင်..အား..ရှီး.. မြန်မြမောင်..အား.. အရမ်းချစ်တယ်ကွာ.. အား.. လို့ ညီးရင်း နောက်ပြန်ဆောင့်ပေးတယ် ။
ကျွန်တော်လည်း မသော်ကို စက်သေနပ်နှင့်ပစ်သလိုဘဲ တဖတ်ဖတ်နှင့်မြန်မြန် ဆောင့်လုပ်ကာ မသော်..မောင်ပြီးပြီ.. အား.. ပြောကာ အချစ်ရည်တွေ သူ့ရဲ့အထဲမှာ ပန်ကာပြီးသွားတယ် ။ သုံးယောက်သား ကုတင်ပေါ်မှာ အဝတ်စာမဲ့ အိမ်ပျော်သွားကြတယ် ။ မနက် ၈ နာရီမှ အတူထကာ ရေချိုးပြီးတော့ အလုပ်ကို သွားလိုက်ကြတယ် ။ သုံးယောက်စုပေါင်းပြီး အလုပ်လုပ်တော့ အလုပ်ကလည်း အဆင်ပြေလာတယ် ။ သူတို့နှစ်ယောက်က တစ်ယောက်က အိမ်မှာချက်ပြုတ်လျှော်ဖွတ်ရင် နောက်တစ်ယောက်နှင့်အတူ အလုပ်လုပ်တော့ ငွေတွေစုမိသလို လုပ်ငန်းတွေလည်း တိုးချဲလာနိုင်ခဲ့တယ် ။ အလုပ်လည်း တော်တော်ဖြစ်လာခဲ့တယ် ။ ၂ လကြာပြီး မသော်မှာ ကျွန်တော့ရဲ့ရင်သွေးကို လွယ်လိုက်ရတယ် ။ မသူဇာကလည်း ကလေးလိုချင်တော့ ဆရာဝန်ဆီကိုသွားကာပြပြီး သူ့ကိုနှစ်သိမ့်ပေးရတယ် ။ အရင်တုန်းက သုံးခဲ့တဲ့ တားဆေးနေရာမှာ အားဆေးတွေဘဲ သုံးလာခဲ့တယ် ။ မသော် ကိုယ်ဝန်က မရင့်သေးတော့ အိမ်ဖော်မခေါ်စေဘဲ သူဘဲအိမ်မှာနေကာ အိမ်မူကိစ္စတွေကို လုပ်ကာ မသူဇာနှင့်ကျွန်တော် အလုပ်လုပ်ကြနယ် ။ မသော်က မသူဇာလည်း ကလေးရအောင် ကြိုးစားဖို့ ပြောနေတာကြားပြီး မိန့်မနှစ်ယောက်က ယောက်ျားတစ်ယောက်ကိုယူပြီး ချစ်ခင်နေကြတာမြင်ရတော့ စိတ်ချမ်းသာတယ် ။ မသူဇာနှင့်ကျွန်တော် ခြံဝယ်ဖို့သွားပြီး ပြနလာခဲ့ကြတယ် ။ အဲ့ဒီနေ့မှာ မသူဇာက အရမ်းကိုလှနေတယ် ။ သူကို တခြားလူတွေကြည့်တော့ နည်းနည်းသဝန်တိုစိတ်ဖြစ်မိသလို ကိုယ့်ကိုလည်းဂုဏ်ယူမိတယ် ။ ကျောက်တန်းက သူ့ရဲ့ အမျိုးအိမ်ကိုသွားချင်တယ် ဆိုလို့လိုက်ပို့ပေးတယ် ။
ဂျီတီစီကျောင်းမရောက်ခင် ခရမ်း သုံးခွဘက်ကို သွားတဲ့လမ်းဘက်ကို သွားလိုက်တယ် ။ သူက မောင် ဒီလမ်းကနေအိမ်ပြန်ရင် ကြာမှာနော် လို့ ပြောပေမဲ့ သူ့ကို မောင်သိပါတယ် မမ ပြောကာ ဆက်မောင်းလိုက်တယ် ။ လူတွေရှင်းတဲ့နေရာကို ရောက်တော့လကားစက်ကို ရပ်လိုက်ပြီး သူ့ကိုဆွဲကာ နုတ်ခမ်းချင်းနမ်းလိုက်တယ် ။ သူကလည်း လည်း ပြန်ကာနမ်းလာတယ် ။ သူ့ရဲ့ခါးပတ်ကို ဖြုတ်ပြီး မမနောက်ထိုင်ကို သွားရအောင်ပြောလိုက်တော့ သူက ခေါင်းညှိတ်ပြိး နောက်ထိုင်ခုံဆီကိုဆင်းသွားတယ် ။ ကျွန်တော်လည်း သူနှသ့်အတူဘဲ နောက်ထိုင်ခုံမှာထိုင်ကာ ဆက်ပြီးတော့ နမ်းကြတယ် ။ သူက အနမ်းကိုရပ်ပြီး အိမ်အထိကို မစောင်နိုင်ဘူးလားမောင်ရယ် လို့ ပြောတော့ ကျွန်တော်က *မစောင့်နိုင်ဘူးမမ မမကိုလူတွေကြည့်တော့ မောင်က သဝန်တိုတယ်ဗျာ ပြောတော့ သူက ကျွန်တော့ကို ဆွဲကာနမ်းပြီးမှ ဝမ်းသာလိုက်တာ မောင်ရယ် ပြောကာ စတိုင်ဘောင်ဘီထဲကနေ ညီလေးကိုထုတ်ကာ စုပ်ပေးတော့တယ် ။ ကျွန်တော်လည်း သူ့စုပ်ပေးတော့ သူ့ရဲ့ညီမလေးကိုလက်လှမ်းကာ ထမိန်ပေါ်ကနေ ပွတ်သပ်ပေးလိုက်တယ် ။ သူက မောင် အရည်တွေရွှဲနေတာ ထမိန်ပေါ်မှာ အကွက်လိုက်ဖြစ်သွားမှာနော် လို့ပြောတာ သူ့ကို စုပ်ပေးတာကို ရပ်စေတယ် ။ ခုံအောက်ကိုဆင်ပြီး သူ့ထမိန်ကိုခါးအထိလှန်ကာတင်လိုက်တယ် ။ အရည်စိုနေတဲ့ဇာပင်တီကို ချွတ်ပြိး အကွဲကြောင်းလေးကိုလျာဖျားလေးနှင့်ယက်ပေးလိုက်တယ် ။
အိုး..မောင်ရယ်.. လို့ညီးသံလေးက နားဝင်ချိုကာ သူ့ရဲ့ညီမလေးကို ပါးစပ်ကြီးတစ်ခုလုံငုံကာ ပြုစုပေးလိုက်တယ် ။ သူက မောင် လုပ်ပေးတော့ကွာ ပြောမှဘဲ သညီလေးကို သူ့ညီမလေးဆီမှာတေ့ကာ အဆုံးထိဆောင့်သွင်းလိုက်တယ် ။ အိုး..ကြမ်းလိုက်တာမောင်ငယ် လို့ သူကပြောလာတယ် ။ ကျွန်တော်ကလည်း မမကိုချစ်လို့ ကြမ်းမိသွားတယ် မမရယ် မောင် ထြည်းဖြည်းလုပ်မယ် ပြောလိုက်တယ်ဘ။ သူက မလိုဘူးမောင် မမက မောင်အဲ့လိုလုပ်တာလပိုသဘောကျတယ် မောင်က မမကို ချစ်လို့လုပ်တာက မမကို အပြစ်မမြင်စေဘူး အာ ဆောင့်ပေးတော့..မောင် လို့ပြောတော့ ကျွန်တော်လည်း သူ့ကို မြန်မြန်ဘဲဆောင့်ကာ လုပ်ပေးလိုက်တယ် ။ အရမ်းချစ်တယ် မောင်ရယ်..အား..ချစ်တယ်.. ချစ်တယ် လို့ ညီးသံလေးနှင့်ပြောလာတော့ စိတ်ကိုလွတ်ကာ အသကုန်ဆောင့်လုပ်ပေးလိုက်တယ် ။ သူနှင့်အတူ ပြီးသွားမှ ထိုင်ခုံမှာ မှိန်းကာနေလိုက်တယ် ။ အိမ်ကိုပြန်ရောက်တော့ ကွတတလေးနှင့်သွား နေတဲ့သူ့ကို ဖက်ကာ အိမ်ထဲကို ဝင်လိုက်ကြတယ် ။ မသော်ထွက်လာပြီး ဘာဖြစ်လာလဲ မေးတော့ ကျွန်တော်ကလပြုံးကာ အဖြစ်အပျက်တွေကို ပြောပြလိုက်တော့ ရယ်လိုက်တယ် ။ သူက မောင်က သဝန်တိုတတ်နေပြီလား မေးတော့ ဟုတ်တယ် မမ ပြန်ဖြေလိုက်တယ် ။ မသော်ကိုရော လို့ မေးတော့ ကျွန်တော်က အခုချိန်မှာ နှစ်ယောက်လု့းကို သဝန်တိုတယ် လို့ ပြောလိုက်တယ် ။ တစ်လအကြာမှာတော့ မသူဇာလည်း ကိုယ်ဝန်ရလာတယ် ။. ပြီးပါပြီ